လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: March 2015
Tuesday, March 31, 2015 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
သွားနာ၊ သွားကိုက်ခြင်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘာဝဆေးနည်း များကို မကြာခဏ တောင်းဆို လာကြသူများ အတွက် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။
(၁) တမာရွက်ကို ကျွမ်းအောင်လှော်၍ အမှုန့် ကြိတ်ပြီး ဆား အနည်းငယ်နှင့်အတူ သွား တိုက်ပေးသော် သွားကိုက်၊ သွားနာစတဲ့ သွားရော ဂါများ ကင်းဝေးစေ၍ သွားများကို ပိုမိုခိုင်မာ လာစေပြီး ဖြူစင်စေပါသည်။
(၂) သွားအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးပင်မှာ ဒန္တသုခပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒန္တသုခပင်၏ ပဉ္စငါးပါးပြုတ်ရည်ကို ငုံပေးခြင်း၊ ပဉ္စငါးပါးကို ပြာချ၍ ၄င်းပြာဖြင့် သွားဖုံး၊ သွားကြားတို့ကို သိပ်ပေးခြင်း၊ ဒန္တသုခပင်၏ အမြစ်ကို အစိမ်းအတိုင်း ကြိတ်၍ သွားကြားကို သိပ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် သွားများကို ခိုင်မာစေ၍ သွားနာ၊ သွားကိုက်ခြင်း များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(၃) နန်းလုံးကြိုင်ပင်၏ အခေါက်ကို ရေ ၃ခွက် ၁ခွက်ကျို၍ ၄င်းရေဖြင့် ပလုတ်ကျင်းခြင်း၊ ငုံခြင်းများ ပြု လုပ်ပေး ပါက သွားနာ၊ သွားကိုက်၊ သွားကျင်၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(၄) ကစော့ခါးသီးပင်၏ အမြစ်ကို သွေး၍ သိပ်ပေးခြင်း၊ အမြစ်ကို အမှုန့်ကြိတ်၍ မှိုင်းတိုက်ကာ အခိုးအငွေ့ ကို ရှုခြင်းတို့ဖြင့် သွားကိုက်၊ သွားကျင်၊ သွားပိုးစား စသည့် သွားရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေ ပါသည်။
(၅) တမာ၏ အရိုးတံကို သွားကြားထိုးတံအဖြစ် အသုံးပြု၍ မကြာခဏ သွားတိုက်ပေးခြင်းဖြင့် သွားရောဂါ များ ကင်းဝေးစေပါသည်။
(၆) နနွင်းမှုန့်ကို ရေနွေးဖြင့် ဖျော်၍ ငုံပေးခြင်း၊ ဆားများများထည့်၍ သွားရင်းတွင် သိပ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ သွားနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(၇) ပင်စိမ်းသတ္ထုရည်နှင့် ငရုတ်ကောင်း၊ ပရုတ်တို့ကို ကြိတ်ပြီး အလုံးလေးများလုံးကာ ပိုးစားသည့် သွားအပေါ်ကို ထည့်ပေးသော် သွားပိုးစားခြင်း ပျောက်ကင်းပါသည်။
(၈) ပင်စိမ်းနှင့်ထန်းလျက်ကို ဆတူရောကြိတ်၍ ပျားရည်နှင့်လုံးထားကာ မနက်တစ်လုံး ညတစ်လုံး စားပေးပါက သွားဖုံးရောင်၊ သွားကိုက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(၉) ၀ါစေ့ကို ပြုတ်၍ ငုံပေးသော် သွားနာ သွားကိုက်များ သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။
(၁၀) ချင်းစိမ်းကို ၀ါး၍ ကိုက်နေသော သွားပေါ်တွင် အုပ်ထား ငုံထားပါက သွားကိုက် သွားနာများ ပျောက် ကင်းစေ ပါသည်။
(၁၁) နီပါးဆေးပင်ခေါ် တောရဲယို၏ အသီးကို မီးဖုတ်၍ ဆားအနည်းငယ် ထည့်ကြိတ်ကာ သွားတိုက်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုပေးပါက သွားရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(၁၂) ပဒိုင်းညိုအစေ့ကို ကြိတ်၍ သွားဖုံးရင်းကို အနည်းငယ်ခန့် သိပ်ပေးထားလျှင် သွားကိုက်၊ သွား နာရောဂါ များ ပျောက်ကင်းပါသည်။
(၁၃) ဘုမ္မသိန်အစေးကို ကိုက်နေသော သွားကြားတွင် ထည့်ပေးသော် သွားကိုက်ရောဂါ ပျောက်စေ ပါသည်။
သွားကိုက်၊ သွားနာရောဂါများကို ခံစားနေရသော ဝေဒနာရှင်များအားလုံး သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ကြ ပါစေ။
ကိုးကား ။ ။ Warazein Min (မြန်မာတို့အတွက်ဆေးမြီးတိုများ)
ကလေးရှိသူတိုင်း သတိထားရမည့် အန္တရာယ်တစ်ခု
Tuesday, March 31, 2015 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ကလေး တစ်ယောက်ဟာ ပလပ်ထိုးထားတဲ့ ဓါတ်ကြိုးကို သွားနဲ့ကိုက်ဆော့ပြီး ဓါတ်ကြိုးမှတဆင့် ဓါတ်လိုက်ကာ မျက်နှာတစ်ခုလုံး မီးလောင်ဒဏ် များစွာနဲ့ အရေးပေါ်ဆေးရုံကို ရောက် သွားတယ်လို့ ကျန်းမာရေး အကြောင်းများ ကို ဖော်ပြပေးနေတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ဒီလိုအလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေနဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း များစွာဟာ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့ပြီး ဆေး ရုံကို မကြာခဏ ရောက်လာကြတယ်လို့ အရေးပေါ် ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကလည်း ဆိုထား ပါတယ်။
မြင်မြင်သမျှကို ကောက်ယူပြီး ဆော့ကစား ချင်ကြတာ ကလေးသဘာဝပါပဲ။ ဘယ်ဟာက အန္တရာယ်ရှိ တယ် မရှိဘူးဆိုတာ လူကြီးတွေကသာ မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းပေးရမှာပါ။
(ကဲ မိတ်ဆွေတို့လည်း ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်တုန်းက ဖြစ်တယ် ဆိုတာတွေကို လိုက်လံ စစ်ဆေး မေးမြန်း မနေပဲ လောလောဆယ် ဒီလို အများအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ သတိပေးပို့စ်လေးကို တဆင့်မျှဝေပေးလိုက် တာက ပိုအကျိုးစေ ပါလိမ့်မယ်)
ဒီပုံကို မြင်တဲ့သူတိုင်း Share တစ်ချက် လုပ်ပေးလိုက်ကြပါ။ အနည်းဆုံး ကလေးတစ်ယောက်၏ အသက် ကို ကယ်တင်နိုင်စေပါလိမ့်မည်။
ကိုးကား ။ ။ Injury Prevention For Babies
ပထမဦးစွာ ရှောက်ရွက် ကြမ်းများကို ရှာထားပါ။ ပုလင်းတစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြား သုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီထည့် ရပါမည်။
ပုလင်းများတစ်လုံးစီတွင် ရှောက် ၉ရွက်စီ ထည့်ပေးပါ။ ရေကျက်အေးများ ပုလင်းများထဲသို့ အပြည့်ထည့်ပြီး အဆို့ ပိတ်လျက် နေပူတွင် ကိုးရက် စီ ထည့်ပေးပါ။ေ၇ကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့် ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်လျက် နေပူတွင် ကိုးရက်လှန်းပေးပါ။
ကိုးရက်စေ့လျှင် ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးနိုင်ပြီ။ နံနက် တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် အဆိုပါေ၇ှာက်၇ွက် ဆေးရည် ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တစ်ဝက်ခန့်ကို မှန်မှန် သောက်သုံးသွား ပေးပါ။
တစ်လနှစ်လရှိသောအခါ အမျိုးသမီးများ ခါးသေးရင်ချီပြီး အဆီပို ဗိုက်ရွှဲမှုများ ကျသွား၍ အသားအရေ စစ်သွားပါမည်။ အဆီကျ ဓာတ်စာဆေးများ စားခြင်းထက် စိတ်ချရသော ရိုးရာဆေးနည်း ဖြစ်ပါသည်။
မှန်မှန် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသည်း အဆီဖုံးခြင်းနှင့် နှလုံးအဆီ ပိတ်ခြင်းတို့မှလည်း သက်သာပျောက် ကင်း စေပါသည်။
လစဉ် မြန်မာ လဆန်း တစ်ရက်နေ့၌ ရှောက်ရွက်နှစ်ရွက်၊ သုံးရွက် ကိုရှာပြီး စားဖြစ်အောင်စားထားရန် အမှာရှိသည်။ ထို့သို့စားပေးခြင်းဖြင့် လေရောဂါများ မ၀င်ရောက်နိုင်၊ လေထိုး၊ လေအောင့်၊ လေငန်းရော ဂါများ မ၀င်ရောက်နိုင်။
လေငန်းရောဂါရှင်များ ရှောက်ရွက်၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့် ဟင်းခါးချက်ကာ နေ့စဉ် သောက် သုံး ပေးခြင်းဖြင့် လေငန်းရောဂါမှ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။
ကညွတ်ဟာ ဆီချိုရောဂါအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လက်နက်ဟုဆို
ကညွတ်ဟာ ဆီချိုရောဂါ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လက်နက်ဟုဆိုကညွတ်ကို ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ သူတွေ ဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် ပုံမှန်ဖြစ် အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဂလူးကို့စ်ကို စုပ်ယူဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်မှုလည်း မြင့်တက် လာ နိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ကညွတ်ဟာ ဆီးချိုရောဂါကို တွန်းလှန်ဖို့ နောက်ဆုံးပေါ်လက် နက်ဖြစ်လာမယ် လို့ သိပ္ပံပညာရှင် တွေက ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ဟာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေမှန်း မသိရှိကြသူ တွေဖြစ်ပါတယ်။ မောပန်း တာ၊ ရေငတ်တာ၊ မကြာခဏ ဆီးသွားတာ၊ မှက္ခရုပေါက်တာနဲ့ အနာ ကျက်နှေးတာလိုမျိုး ဆီးချိုရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကို မသိရှိနားမလည်ကြ လို့ပါ။ အဲဒါတွေကို ကုသမှုမခံယူရင် အ မျိုးအစား (၂) ဆီးချို ရော ဂါကြောင့် နှလုံးတိုက်ခိုက် ခံရတာ၊ အမြင်အာရုံ ဆုံး ရှုံးတာနဲ့ ခြေပြတ်လက်ပြတ်တွေ ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
ကညွတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားနဲ့ တစ်သျှူးတွေမှ ဂလူးကို့စ်သုံးစွဲနိုင်မှု ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မား စေ တယ်လို့ ကရာချိ တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ကညွတ်အနှစ်ပမာဏများစွာ သုံးစွဲပါမှ မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင်ထုတ် လုပ်မှုကို ထိရောက်စွာ အကျိုးရှိနိုင်တယ် လို့ သိရပါတယ်။
(၁) ဘေးကင်းတဲ့ အသားကိုရွေးပါ
စူပါမားကက်မှာ အသားဝယ် လျှင် ရေခဲသေတ္တာ အောက်ဆင့်က အသားကို ရွေး ပါ။ အပေါ်ဆင့်ရှိ အသားများသည် အေးသင့် သလောက် မအေးဘဲ ဖြစ်တတ်သည်။
လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် အသားများကို ရေခဲသေတ္တာ အအေးခန်း (refrigerator) တွင် နှစ်ရက်အထိ ထားနိုင်သည်။ အခဲခန်း(freezer)တွင် လပေါင်းများစွာ အထားခံ သည်။အအေးခန်း (refrigerator) တွင် ၄၀ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ရှိသင့်ပြီး အခဲခန်း (freezer) တွင်သုညဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ရှိသင့်သည်။
အေးခဲထားသည့် အသားကို ရေထဲထည့်စိမ်၍ ရေခဲပျော်အောင် ထားပါ။ မီးဖိုစင်တွင် အတိုင်းသားတင် ၍ ရေခဲပျော်အောင်ထားခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယားများ ပွားလာစေသည်။
အသားကိုင်မည့် လက်ကို ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ စဉ့်နှီတုံး၊ ပန်းကန်၊ ဓား၊ ဒယ်အိုးမှန်သမျှကို ဆေးကြောပါ။ ပန်းကန်ဆေးစင်(sink)ကို ဆေးကြောပါ။
ကြက်သားကို (၁၆၅)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ချက်ပါ။ ၀က်သားနှင့် အမဲသားကို (၁၄၅)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ ငါးကို (၁၄၅)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ချက်ပါ။
(၆) မုန့်ဖုတ်ထားသည့် စားသောက်ကုန်များကို သတိထားပါ
ကြက်ဥ ပေါင်မုန့်၊ ကွတ်ကီး စသည့် အသင့်စားထုတ်ကုန်များကို မစားပါနှင့်။ ၄င်းတို့တွင်ပါသည့် ကြက်ဥ သည် မကျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ အထားကြာလျှင် ဖြစ်စေ ဘက်တီးရီး ယားဝင်တတ်သည်။
အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ကျရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုကုစားနိုင်မလဲ
စိတ်ကျမှုဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူပါဘူး။ အထူး သဖြင့် ယောကျာ်းလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ မတူ ညီတတ် ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေ ဟာ ယောကျာ်းလေးတွေ ထက်ပိုပြီး စိတ်ကျလွယ် ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ လက္ခဏာတွေ ဟာ ယောကျာ်းလေးတွေ စိတ်ကျရတဲ့ အကြောင်း ရင်းနဲ့လည်း မတူညီပါဘူး။
စိတ်ကျမှုဟာ ဆိုးရွားပြင်းထန်လှတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါပဲ။ အခန့်မသင့်ရင် ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျနေတဲ့အတွက် လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အချစ်ရေး၊ အလုပ် အကိုင်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက်တော့ စိတ်ကျ တယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အမျိုးသား စိတ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆိုအရတော့ မိန်းကလေး ရှစ်ယောက် မှာ တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေရာရာ၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ စိတ်ဓါတ် ကျနေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၀မ်းနည်းနေမယ်၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရမယ်၊ ပင်ပန်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်ကျလာနိုင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ စိတ်ကျတာကို ကုသလို့ရပါတယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကျမှုနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို နားလည်လာတာနဲ့ပဲ စိတ်ကျမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း လာနိုင်မှာပါ။
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကျရခြင်း အကြောင်းတွေကတော့
ပုံမှန်လည်ပတ်နေကျ အရာတွေပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာတာ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုနည်းလာတာ
အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတာ၊ မျှော်လင့်ချက်မရှိတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရေးမပါဘူးလို့ ထင်လာတာ
အအိပ်မမှန်တာ (အလွန်အကျွံအိပ်တာ၊ အိပ်ချိန်နည်းတာ)
အစားမမှန်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲ လာတာ
ပင်ပန်းပြီး အင်အားမရှိဖြစ်နေတာ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ဆောင်းရာသီမို့လို့ နေရောင်ကောင်းကောင်း မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျတာမျိုး က မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျလက္ခဏာပြမှုက တမူထူးလှပါတယ်။ ဒီလိုတစ်မူထူးတဲ အချက်တွေကတော့ အအိပ်နည်း၊ အစားနည်း၊ ပေါင်ချိန်လျော့တာတွေထက် အလွန်အကျွံအိပ်တာ၊ အစားအရမ်းစားတာ၊ (အထူး သဖြင့် အဆီဓာတ်များတာတွေကို စားတာ)၊ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတာတွေဖြစ်ကြတာပါပဲ။ စိတ်ကျ တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်နေတတ်တာ မိန်းမတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ စိတ်ကျမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ ခြားနားချက်တွေကို ခုလိုဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
၀မ်းနည်း၊ စိတ်မပါ၊ အရေးမပါဘူးလို့ ခံစားရ
အစားစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့၊ အချစ်နဲ့စိတ်ဖြေ
ဒါသထွက်၊ စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုးဖြစ်၊ အတ္တကြီး
အရက်သောက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ အားကစားလုပ်၊ ကာမနဲ့စိတ်ဖြေ
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေကတော့
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနဲ့ ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရာသီမလာခင်အခက်အခဲ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ မျိုး မအောင်တာ၊ ကလေးမွေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာစိတ်ကျ၊ သွေးဆုံးချိန်အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ စတာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပညာပိုင်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခံစားလို့မကောင်းတာတွေနဲ့ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေတာ၊ အလုပ်၊ အိမ်၊ကျောင်း စတာတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုများနေတာ၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကျေမနပ် ဖြစ်နေ တာတွေကြောင့် စိတ်ကျလာတယ် လို့ပြောရမှာပါပဲ။
စိတ်ဓာတ် ကျနေတာကိုသိရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကုသလို့ရပါတယ်။
သင်ခံစားနေ ရတာတွေကို ယုံကြည်လို့ရတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် ကိုပြောပြလိုက်ပါ။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ချင်စိတ် မရှိဘူးဆိုရင်တောင် အားတက်သရောပါဝင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ တက်တက် ကြွကြွ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါ။ တစ်နေ့အနည်းဆုံး ရှစ်နာရီ ဆက်တိုက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပါ။ တစ်နေ့ တာ အတွင်းနေရောင်ရတဲ့နေရာမှာ အချိန်နည်းနည်းနေပေးပါ။ စိတ်တင်းအားတွေကို ဖြေလျှော့နိုင် တဲ့ လေ့ကျင့် ခန်းတွေ လုပ်ပေးပါ။
ရာသီမလာခင်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ကျမှုပြ လက္ခဏာများ
စိတ်ခံစားမှု အပြောင်းအလဲမြန်၊ အငိုလွယ်
အချစ်ရေးနဲ့နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် စိတ်မ၀င်စား
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်၊
ရင်သားတွေနာမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ကြွက်သားတွေ နာမယ်စတာတွေပါပဲ။
ရေလိုအေး၍ ပန်းလိုလန်းသည့် နှစ်ကူးတန်ခူးသင်္ကြန်
မြန်မာပြက္ခဒိန်၏ လများအစ တန်ခူးလကို ''စိတ္တကော တန်ခူးလ၊ ရမ္မကော တန်ခူးလ''ဟူ၍ ပရိယာယ် နှစ်မျိုးပြဆိုထားသည်။ အနက် အဓိပ္ပာယ် မှာ ''အထူးထူး သော အပွင့်အသီးတို့ဖြင့် ဆန်း ကြယ် သည်၏ အဖြစ် ကြောင့် လူတို့၏ စိတ်နှလုံး ကို မွေ့လျော်စေတတ်သော ကြောင့် တန်ခူးလ ဟုခေါ်၏'' ဟူ၍ အဘိဓာန် ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထား သည်။ အထူးထူးသော အပွင့်အသီးတို့ဖြင့် ရှုချင် စဖွယ်ကောင်းသောလ၊ သာယာ ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းသောလဟု ဆိုအပ်၏။
တန်ခူးရေကုန်၊ ကဆုန်ရေခန်း ဆိုစကားအရလည်း မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်တို့တွင် ရေများပင်ခန်းခြောက်တတ် ၏။ သစ်ရွက်တို့ြေ<ွကပြီးလျှင် အကိုင်းအခက်တို့သည် ရိုးတံကျဲကျဲဖြစ်လျက် ရှိ၏။ ''တန်ခူးမည်မှတ်၊ ဖက်ဆွတ် ရေတိုး၊ သင်္ကြန်မိုး'' ဆိုစကားအရ ဖက်ဆွတ်မိုးတို့ ရွာသွန်းတတ်သည်။ ထိုအခါ ရိုးတံကျဲကျဲ အပင်တို့သည် ရွက်သစ်၊ ရွက်နုလေးများဖြင့် စိမ်းလန်းဝေလွင် ငယ်ရုပ်တို့ ဆင်ကြပေတော့မည်။ မြေသင်း ရနံ့တို့သည် လည်း သင်းတပျံ့ပျံ့ရှိချေပြီ။ ''လမ်းတစ်လျှောက် သင်းပါဘိ၊ ဆန်းသလောက် မလင်းနိုင်ဘူး၊ ပန်းပိတောက် မင်းဟူ''၍ ပိတောက်ဝါဝါတို့ဖြင့် လတန်ခူးကို အလှဆင် ထားကြသည့် တန်ခူးလ၏ အလှဆုံး အရာမှာ သင်္ကြန် ပွဲတော် နှစ်သစ်ကူးသည့် အချိန်အခါဖြစ်၏။
''ခါလည်လုလု၊ ရတုသစ်သစ်၊ သရစ်ပေါ်ပေါ်၊ သာပျော်ရွှန်းရွှန်း၊ ကိန်းခန်းသင့်မော၊ ရွက်ရင့်လျှော၍၊ ရွက်ကျောနုလှန်၊ ရွက်သစ်ပြန်တည့်၊ ပန်းမာလ် ငုံကင်း၊ သုတ်လေညင်းနှင့် မြေသင်းရနံ့၊ တပျံ့ပျူးပျူး၊ မင်းလွင် မြူးလျက်၊ တန်ခူးလည်းကုန်၊ လကဆုန်သည်၊ ပစ္စုန်ရိုက် မြည်း၊ ချုန်းချုန်းတည်း'' ဟူ၍ မြေသင်းရနံ့ တို့ သင်းပျံ့ နေသည်ကို ရှင်အဂ္ဂသမာဓိက ဘုံခန်းပျို့တွင် တင်စား၍ ဖွဲ့ဆိုခဲ့လေသည်။
တန်ခူးလ ကို တာကူးဟူ၍ ရေးသည်လည်းရှိ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ပျို့ကဗျာတို့၌ တကူးလဟူ၍ရေးကြသည်။ တာကူးဟူသော အရေးအသားမှာ မိန်ရာသီမှ မိဿ ရာသီသို့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေမင်းပြောင်းခြင်းကို စွဲ၍ ရေး သား ကြောင်းကို ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီကျမ်းပြုစုသူ လှေသင်း အတွင်းဝန်မင်းက ဆိုသည်။ ဤအဆိုကို လိုက်၍ ဝေါဟာရ၏ဇာစ်မြစ်ကို ရှာဖွေသူတို့က တာကူးမှတန်ခူးသို့ ရွေ့လျားသည်ဟုကြံဆကြသည်။ သို့ရာတွင် ပုဂံ ကျောက်စာ၏ အရေးအသားတို့ကို အခြေခံ၍သုတေသန ပြုသော ဆရာကြီးဦးဖိုးလတ်၏ အဆိုအရ တာကူးဟူ သော အသုံးအနှုန်းနှင့် တန်ခူးဟူသော အခေါ်အဝေါ်တို့ သည် သူ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်သူ တခြားစီဖြစ်သည်။ ''တာ''သည် အချိန်အခါ၊ ရာသီဥတု၊ နှစ်စသည်တို့ကို ဟော သည်ဖြစ်ရာ ဤတာကူး ဟူသော ဝေါဟာရ၌ နှစ်ကို ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် တာကူးလသည် နှစ်ကူး သောလဟု အဓိပ္ပာယ်ရ သည်ဟု ဖော်ပြထား၏။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးတိုင်းမှာပင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် များ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပသော ဓလေ့ထုံးစံများ ရှိ သည်။ နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်ကို အမြတ်တနိုးကျင်းပ ကြသည်။ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြ သည်။ မြန်မာ တို့၏ နှစ်သစ်ကူးအခါသဘင်ကို ''သင်္ကြန်''ဟု ခေါ်သည်။ သင်္ကြန်ဟူသောဝေါဟာရ ''သင်္ကြာန္တ'' ဟူသည့် သက္ကတစကားမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဝေါဟာရလီ နတ္ထဒီပနီ နှင့် ဝေါဟာရ တ္ထပကာသနီတို့တွင် ဖော်ပြ ထားပေသည်။ ပညာရှင်အချို့ကမူ ''ပါဠိစကား'' ''သင်္ကန္တ'' မှ ဆင်းသက် လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုကြစေကာမူ အဓိပ္ပာယ်မှာ ''ကူးပြောင်းခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း''ဖြစ် သည်။ ဤကမ္ဘာမြေ သည် နေကို ဗဟိုပြု၍ လှည့်လည်နေခြင်း ဖြစ်၏။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေမင်းသည် မိဿရာသီမှစ၍ ပြိဿ၊ မေထုန်၊ ကရကဋ်၊ သိဟ်၊ ကန်၊ တူ၊ ဗြိစ္ဆာ၊ ဓနု၊ မကာရ၊ ကုမ်၊ မိန်ဟူသော ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်တို့သို့ အစဉ် လိုက်ကူးပြောင်း လှည့်လည်ပြီးနောက် သူရိယ၊ သိဒ္ဓန္တကျမ်း အလို ၃၆၅ ရက်၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်၊ ၃၇ စက္ကန့်ပြည့်သော အခါ တနင်္ဂနွေ ရဝိဖုဋဂြိုဟ်စင်သည် မိဿရာသီအစ သုည အင်္သာသို့ဝင်၏။ ထိုကဲ့သို့ ဝင်ရောက်စအချိန်တွင် သင်္ကြန် ကျသည်။ သို့ရာတွင် နှစ်မ ကူးသေးချေ။ ဗေဒင်တွက် ရိုးကျမ်းများ၌ ရဝိဖုဋဂြိုဟ်စင်နှင့် ရဝိမဓျဂြိုဟ်သွမ်းဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားပြသည်။
ထို့ကြောင့် မိဿရာသီသို့ ထိုဂြိုဟ်နှစ်မျိုးနှစ်စားရောက်သော အချိန်ကာလသည် လည်း ကွဲပြားသည်။ မိဿရာသီသို့ တနင်္ဂနွေရဝိဖုဋဂြိုဟ် ဝင်ရောက်ရှိပြီး၍ ၂ ရက်၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ်၊ စက္ကန့် ၄ဝ ကြာမှ တနင်္ဂနွေ ရဝိမဓျဂြိုဟ် သွမ်းရောက်ရှိ၏။ ထိုကဲ့သို့ ကွာခြားသော နှစ်ရက်ကျော်ကာလသို့ ဝင်သောအခါကျ မှသာ အတာတက် ၍ နှစ်သစ်ကူးပြီဟု အသိအမှတ်ပြုကြ သည်ကို သင်္ကြန်တွက်ရိုးကျမ်းတို့ အလိုအရလည်းကောင်း၊ ဆရာကြီးမောင်ထင်၏ မြန်မာ့ဆယ်နှစ်လရာသီအကြောင်း စာ-၆၄ အရလည်းကောင်းဖော်ပြပါ၏။
နှစ်သစ်မကူးမီ တန်ခူးလ၏ ရက်တို့ကို နှောင်းရက် သတ်မှတ်ပြီး နှစ်သစ်ကူးပြီးနောက် နှစ်ဆန်းစ တန်ခူး လ၏ ရက်တို့ကို ဦးရက်ဟုသတ်မှတ်သည်။ နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူးဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် ဧပြီလနှင့် တိုက်ဆိုင်သည်။ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်သည် ဧပြီလ ၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက်အတွင်း ကျရောက် တတ်၏။
သင်္ကြန်ဟူသောဝေါဟာရ မှာလည်း မြန်မာစကား သက်သက်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ပညာရှင်များက ''ခေါင်းဆေးသင်္ကြန်၊ ကောင်းညွန့်လှံ၊ မကျန်စုံစွာ'' ဟူသော ကဝိလက္ခဏာ သတ်ပုံလင်္ကာနှင့်အညီ ကောင်း ကျိုး မင်္ဂလာ ကြန်အင်လက္ခဏာတို့ တိုးပွားစေရန် သန့်စင်ဆေးကြော ခြင်းဖြင့် ခေါင်းဆေး မင်္ဂလာပြုခြင်း ကိုပင် သင်္ကြန်ဟုခေါ် ကြောင်း ပြဆိုခဲ့ကြသည်။ ပတိဏ္ဍနိကာယ် ဒသဗြဟ္မဇာတ်၌ ဘုရင်မင်း များ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုသည်ကို သင်္ကြန် တော်ခေါ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ရှေးမင်းဧကရာဇ်တို့ သင်္ကြန်တော်ခေါ်ထုံးအစဉ်အလာရှိကြောင်းကိုသိရသည်။ ပုဂံခေတ်၌ အခြားလများတွင် သင်္ကြန် ကျသောနှစ်များ ရှိဖူးသည်ဟုဆိုပါသည်။
မျက်မှောက်ခေတ် အများသိနေ သော တန်ခူးသင်္ကြန်ကို အာဒိတျနှစ်ဟူ၍ခေါ်ဆိုကြောင်း ဇနပ ပတ္တိကကျမ်း တွင် ပါရှိပေသည်။ ဇောတိသတ္ထဗေဒ ကျမ်းတွင် တစ်နှစ်၌ တစ်ဆယ့်နှစ်ကြိမ် သင်္ကြန်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြ သည်နှင့်အညီ ရှေးမြန်မာဘုရင်မင်းမြတ်များသည် တစ်လကူးပြောင်းတိုင်း ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုကာ သင်္ကြန် တော်ခေါ်လေ့ရှိသည်။
အတာသင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုသည်နှင့်အညီ နှစ်ဟောင်း ကုန်၍နှစ်သစ်ကူးချိန်ကိုခေါ်သော အမည်ဖြစ်သည်ကို အတာမှာ အတီတဟူသောပါဠိ၏ အတီဟူသော စကားလုံး မှ အတာဖြစ်လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။ အတီတ သည် အတိတ်၊ လွန်ခဲ့ပြီးသောကာလဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်အတာ၊ အတာသင်္ကြန် ဟူသော စကားသည် နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးရက်သုံးရက်ကို ခေါ်ဆိုသော အမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလို ကြခြင်းဖြစ်၏။
သင်္ကြန်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရေပက်ကစားသော ဓလေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလိယပြည်နှင့် မြတ်ဘုရား ရှင် ဖွားမြင်တော်မူရာ ကပိလဝတ်ပြည်ကြားတွင် ဒေဝဒဟ ပြည်မပေါ်သေးမီက ဒေဝဒဟခေါ်ဆိုသည့် နတ်ရေကန်ကြီး ရှိသည်။ ထိုနတ်ရေကန်သို့ နှစ်ပြည်ထောင်မှ သကျသာကီ နွယ်ဖွား မင်းသား၊ မင်းသမီး တို့သည် ရေပက်ကစားရင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရင်းနှီးခင်မင်သွားကြလေသည်။ ဒေဝဒဟ ရေကန် အနီး ရေ ကစားကြရာမှ နောင်အခါတွင် မိမိ တိုင်းပြည်သို့ မပြန်ဘဲ ဒေဝဒဟပြည်ဟု တည်ထောင်ကြကာ နေလာ ကြ၏။
သင်္ကြန်ပွဲတော်၌ အကျီစားသန်သဖြင့် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲစရာအဖြစ်တို့နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်လည်းရှိခဲ့ သည်။ ပုဂံပြည့်ရှင်ဘုရင် နရသီဟပတေ့လက်ထက်၌ မိဖုရားစောလုံသည် ဘုရင်မင်းမြတ်က အလွန် ချစ်မြတ်နိုး သော မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဘုရင် နရသီဟပတေ့သည် မိဖုရားစောလုံကို ကျီစယ် လိုသောကြောင့် မောင်းမမိဿံ တို့အား ''မိဖုရားစောလုံတစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲအောင်ရေပက် ကြစေ''ဟု အမိန့်တော် ရှိတော်မူသည်။ ထိုအခါ မိဖုရား စောလုံသည် သင်္ကြန်ရေအပက် ကြမ်းလှသောကြောင့် ဘုရင့်အပေါ်၌ အငြိုးထားပြီး ပွဲတော်အုပ်တည်ရာတွင် ဘုရင့်အား အဆိပ်ခတ်လိုက်သည်။ သို့ရာတွင် ကံအား လျော်စွာ ပွဲတော်မတည်မီ နန်းတော်အောက်က ခွေး ချေဆတ်၍မစားဘဲ ခွေးကိုကျွေးလေသည်။ ထိုအခါ ခွေးသေ၍ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် အချစ်ကြီးအမျက်ကြီး သဖြင့် မိဖုရားစောလုံကို ကွပ်မျက်လေသည်။ ဤကဲ့သို့ ကွပ်မျက်ပြီးမှ နောင်တအကြီးအကျယ်ရ၍ ''စောလုံ စောင့်ပါခလှည့်'' ဟု မကြာခဏ ယောင်ယမ်း တမ်းတ သောဟူ၏။
ဤသည်တို့အား ''ရေကစားကြသောအခါတွင် မခံချင်သော စောလုံကဲ့သို့ စိတ်ထားနုသည့်သူများကို မကျီစယ်၊ မကစားကြလေနဲ့၊ အကျီစားသန်ရန်တဲ့''ဟု သတိပေးပြီးလျှင် ''ဒေါပုံအလှည့်သံသရာရေအပြင်မှာ ကြွားသူတို့ကဖြင့် သဘောမဆုံသနဲ့ မခံချင်ပါလျှင်လည်း မကစားကြလေနဲ့ ချောဂုဏ်နဲ့နွဲ့ရှာတဲ့စောလုံရဲ့ ပုဂံ ရာဇဝင်တရား''ဟု ပုဂံရာဇဝင်လေးချိုးကြီး၌ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက သတိပေးရေးသား ခဲ့ဖူး သည်။ ဤပုဂံရာဇဝင်အရ ပုဂံခေတ်တွင် ရေကစားကြကြောင်း မှတ်တမ်းသဖွယ်ရှိနေသည်။ အကျီစားသန် က ရန်ဖြစ် တတ်သည်ဟူသော သတိပြုဖွယ်သင်ခန်းစာပင်ဖြစ် သည်။
နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်သို့ကူးပြောင်းသော နှစ်သစ်ပွဲတော်များ ရှိသကဲ့သို့ မြန်မာတို့၏အတာသင်္ကြန် ပွဲတော်တွင် နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကို သင်္ကြန် ရေဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ကာ နှစ်သစ်ကို လူသစ်၊ စိတ်သစ်ဖြင့် ကူးပြောင်းပျော်ရွှင်ကြပေသည်။
သာသနာဝင်ကျမ်းတို့၌ အတာကူးသော တန်ခူးလ အခါတွင် ကပိလဝတ်ပြည်၌ နေထိုင်ကြကုန်သော သာကီဝင်မင်းတို့သည် နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ရှိသော ဒေဝဒဟရေကန်မှာ သိမ်မွေ့စွာရေပက်ဖျန်းကစား ကြခြင်း အစဉ်အလာရှိခဲ့သည်။ မေတ္တာအရင်းခံလျက် သန့်စင်စွာရေကစားခြင်းမှာ အံ့သြဖွယ်ရာကောင်း လျက် ထူးခြားလှသည်။ အမှတ်တရမှတ်တမ်းဖြစ်စေတော့၏။
တချို့ရပ်ရွာများတွင် နှစ်ဦးအစဖြစ်သော မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ကို မင်္ဂလာရှိအောင် ကျင်းပခြင်း ပြုလုပ် ကြသည်။ အန္တရာယ်ကင်းစေရန် ပရိတ်တရား တော်များ နာယူခြင်းဖြင့် အနိဋ္ဌာရုံတွေ ပပျောက်ပြီး ဣဋ္ဌာရုံ အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံရ၏။ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းပကြစေရန် ဆုတောင်းလျက် အရှက်နှင့်အကြောက် တည်းဟူသော လောကပါလတရားနှစ်ပါးကို စောင့်ထိန်း ကြရပေမည်။
(၁) သတ္တဝါများကိုချစ်ခင်၍ ဘေးရန်ဆင်းရဲကင်း စေလိုခြင်းဟူသော မေတ္တာ
(၂) ဆင်းရဲသည့် သတ္တဝါများကို သနားကြင်နာ၍ ဆင်းရဲခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေလိုခြင်းဟူသော ကရုဏာ
(၃) စည်းစိမ်ပြည့်စုံသူများကိုမြင်လျှင် ဝမ်းမြောက်၍ စည်းစိမ် မဆုတ်ယုတ်စေလိုခြင်း ဟူသော မုဒိတာ
(၄) သတ္တဝါတို့သည် ကံအတိုင်းဖြစ်ကြ၏ဟု ဆင်ခြင်၍ မုန်းစိတ်မပြုဘဲ တည့်မတ်စွာရှုမြင် ခြင်းဟူသော ဥပေက္ခာ
စသည့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးတို့ကို နှစ်ဆန်းအခါ သမယမှစကာ ထွန်းကားပြန့်ပွားစေအောင် ဆောင်ရွက် ကြရမည်။
မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်ပွဲတော်သည် ပျော်ရွှင်စွာ ရေပက်ကစားခြင်းနှင့် ရေပက်ဖျန်းခြင်းသည် လေးနက် မွန်မြတ်သော အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။ ရေသည် မေတ္တာဓာတ်ကို တင်စား၏။ ရေကစားကြသည်မှာ ''ရေလိုအေး၍ ပန်းလိုလန်းပါစေ''ဟူသော မေတ္တာဓာတ်ဖြင့် ကစားခြင်း ဖြစ်၏။
ဤအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဝိသေသထူးစေခြင်းငှာ ''တောင်လေသုတ်ဖြူး၊ လတန်ခူးမူ၊ မြူးတူးပျော်ရွှင်၊ တာသဘင်ဝယ်၊ ဆင်ယင်တုပ၊ လရရွတည့်၊ ငြိမ့်မျှ စောင်းခြင်း၊ အဲသီချင်းနှင့်၊ ထုံသင်းနံ့သာ၊ ရေသီ တာဝယ်၊ ဓမ္မာကရမက်၊ ပန်းပေါင်းဖက်၍၊ ရွှေခွက်အပြည့်၊ မွှေးမျိုး ထည့်မှ၊ လည်လှည့်ဆူလှယ်၊ တင်စမ္ပာယ် လျက်၊ ပြုံးရယ် ရွှင်အေး၊ စံပျော်ပါးသည်၊ ကစားထုံရည်၊ ဖျန်းတည့်လေး''ဟူ၍ ဆီသည်ရွာစား ဦးအောင်ကြီး က အင်းဝမြို့ဘွဲ့ လူးတားတွင် အတာမြင်ကွင်းကို ပုံရိပ်ဖော်ခဲ့၏။ အမွှေး အကြိုင်တို့ကို ဖလားတွင်ထည့်၍ ထုံသင်းနံ့သာဖြင့် ပြုံးရယ်ရွှင်အေးစွာ ရေကစားကြပုံကို ဖွဲ့ဆိုထား၏။
ဤကဲ့သို့ ရေကစားခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာနှင့်အညီ သင်္ကြန်တွင်ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် ထူးခြားသော အမျိုးသားပွဲတော်ကြီးအဖြစ် ဂုဏ်ယူ ကြရဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ ကိုလည်း မပျောက်မပျက်အောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကြရပေမည်။ ။
အစားအိမ်နှင့် အူသိမ်ဦးပိုင်းရှိ အတွင်းနံရံ အမြှေးပါး တွင်း ဖြစ်ပွားသော အနာရောဂါနှင့် အဆိုပါနေရာ များရှိ အမြှေးပါးများ ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော အစာမကြေခြင်း၊ ရင် ဘတ်အောင့်ခြင်းရောဂါ ဝေဒနာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ယခင်အခါများက အစာအိမ်အတွင်း အက်စစ်ဓာတ် လွန်ကဲခြင်းကြောင့် အစာ အိမ်ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့် ယခုအခါ H.pylori ရောဂါ ပိုးကြောင့် အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲကာ အစာအိမ်ရော ဂါ ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကိုက် အခဲပျောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှု ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာ လူဦးရေရဲ့ ၁၀% အထိ ဖြစ် ပွားလေ့ရှိတတ်ပါ တယ်။
၀မ်းဗိုက်အထက်ပိုင်း ရင်ညွန့်နေရာမှအောင့်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အစာအိမ်ပေါက်သွားခြင်းကြောင့် ၀မ်းဗိုက် အထက်ပိုင်း အလွန် အမင်းအောင့်ခြင်း၊ အစာအိမ်အနားမှ သွေးယိုစီးတဲ့ အတွက် သွေးအန်ခြင်း၊ သွေးဝမ်း သွားခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရပါတယ် အစာအိမ်နာရောဂါ ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာ တဲ့အခါ၊ အစာအိမ် ထွက်ပေါက်ကျဉ်းပြီး ပိတ်ဆို့တတ်သောကြောင့် စားပြီးသော အစာများ မကြာခဏ ပြန် အန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
အချို့သောသူများမှာ အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်နဲ့ လာတတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ် မှန်း သေ ချာအောင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ အဆု့းအဖြတ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ် လမ်း ကြောင်း မှန်ပြောင်းနှင့် ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း၊ H.pylori ပိုးရှိမရှိ မှန်ပြောင်းနှင့်ကြည့်ခြင်း၊ အစာအိမ် နာဖြစ်သောနေရာမှ အသားစ ယူကာ စစ်ဆေးခြင်း(သို့) အစာအိမ်မှန်ပြောင်းမကြည့်ဘဲ H.pylori ပိုး အတွက် ပဋိပစ္စည်းများ၊ ခုခံပစ္စည်းများ ထွက်နေခြင်း ရှိမရှိ သွေးကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း အားဖြင့်လည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆိုဒါမှုန့်ဆေးဝါးနှင့် ခေတ္တခဏ ဝေဒနာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ATACID ဆေးပြားများသောက်ခြင်းဖြင့် အတော်အတန် အစာအိမ်နာရောဂါကို ဖုံးကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ CIETIDINE,RANITIDINE စတဲ့ ဆေး များနှင့် အစာအိမ်အနာအများအပြားကို အနာကျက်စေနိုင်ပါတယ်။
OMEPRAZOLE ဆေးနှင့် အစာအိမ်နာများကို အလျင်အမြန်ပျောက်ကင်း စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာ အိမ်ရောဂါများဟာ သဘာဝအလျောက် တစ်နှစ်အတွင်း ၈၀%မှာ ရောဂါပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ H.pylori ပိုးလုံးဝ ကင်းစင်နိုင် သောကုသမှု စတင်အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀-၉၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အစာအိမ် နာရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ၊ ကုသမှုများ ခံယူ ရပါမယ်။
အစာအိမ်နာရောဂါဟာ ယခု ၂၁ ရာစုနှစ်တွင် ဆေးဝါးနှင့် လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်သော ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက လက်ခံထားကြပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ကုသရန်လိုပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ ကိုလည်း မိမိသဘောနှင့် မိမိအလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါကြောင်း မှာကြားချင်ပါတယ်။
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်းများအတွက် အစွမ်းထက် ဆန်ဆေးရည်
အစာအိမ်ရောဂါ ခံစားရသူများသည် အစား စာလောင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်အတွက် စားစရာများကို ကိုယ့်နှင့် မကွာ ဆောင်ထားကြသည်မှာ များကြပါ သည် …သင်သည် ယခုဆန်ဆေးရည်ကို နေ့ စဉ် ပုံမှန်သောက် သုံးပါက အစားအစာဆောင်ရခြင်းနှင့် အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်းများ မရှိတော့ပါ ။
ကျောင်းတက်စဉ်က သူငယ်ချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေ များထဲ့မှ အစာအိမ်ဖြစ်သော သူများကို ပြော ပြပြီး သောက် ခိုင်းခဲ့လို့အစာအိမ် သမား တော်တော် များများပျောက်ကင်း သက်သာခဲ့ပြီး ကောင်ညှင်းပေါင်းတောင် မစားရဲသူများတောင် စားလို့ ရလာနိုင်သော ဆန်ဆေးရည်ဖြစ်ပါသည်…
အစာအိမ် သမားများအတွက် ဆန်ဆေးရည်ကို အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်သောက်သုံးလိုက်ပါ မနက် အိပ်ယာထထခြင်း မနက်ဆန်ဆေးရည်ကို မက်ခွက်တခွက်လောက်ကို အမြဲသောက်ပေးပါ ..ရောဂါပေါ် မှုတည်ပြီး သောက်ပေးရပါမည် အချိန်ကိုတော့ လပိုင်းထိ မနက်တိုင်း မနက်တိုင်းသောက်ပေးပါ
ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဆေးသောဆန်ဆေးရေကို လက်ဖြင့် ကျကျနန ပွတ်သက်ဆေးကြောပြီး ရရှိလာသော ဆန်ဆေးရေကို မနက်အိပ်ယာထထခြင်း မက်ခွက်ကြီး တခွက်စာ သောက်သုံးပေးပါက အစာအိမ်ဖြစ်သော သူများသည် မိမိဖြစ်နေသော ရောဂါဝေဒနာ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်သည် ။
ဒန့် သလွန်သီးက ဘာတွေရမလဲ
ဒန့်သလွန်ပင်သည် အတန်ငယ်ခြောက်သွေ့ သော အပူလျော့ဇုန်ပိုင်း ဒေသများ တွင် ကောင်းစွာဖြစ် ထွန်းပြီး အစေ့မှ အပင်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ရှင်သန်မှု လျှင်မြန်သော နှစ်ရှည်ပင်ဖြစ် ပါသည်။ မိုးဥတုတွင်တော့ ဒန့်သလွန်ပင်၏ အကိုင်းရင့်ရင့် အပိုင်းကိုခုတ်၍ စိုက်ပျိုးရှင်သန် နိုင်ပါသည်။ သို့ သော် အစေ့မှ စိုက်ပျိုးခြင်းက သေချာမှုရှိစေ ပါသည်။ ဒန့်သလွန်ပင်၏ ပင်စည်အသားသည် အခြားအပင်များနှင့်မတူ တုတ်ခိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ကိုင်းဆတ်ပြီး၊ ပိုးကိုက်တတ်သော ပင်စည် အမျိုး အစား ဖြစ်သည့်အတွက် အပင်ပေါ်တက်ရန် အန္တရာယ် များလှပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အ သီးတောင့်နှင့် အရွက်တို့ ကို အောက်မှ ၀ါးလုံးတံ ချူဖြင့်သာ ခူးဆွတ်လေ့ ရှိကြပါသည်။ အသီးတောင့် များ မရင့်မှည့်ခင် အပင်ပေါ်မှ ခူးဆွတ်ပေး ရပါသည်။ တစ်နှစ် ပတ် လုံးလိုလို အစိမ်းရောင် အရွက်ဝိုင်းဝိုင်း ကလေးများဖြင့် ဝေနေတတ်သော်လဲ ဆောင်းအကုန် နွေဦးရာသီ တွင်တော့ အရွက်ကြွေလေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ နောက် ရွက်ဟောင်း ကြွေပြီး ရွက်နုပြန်ထွက်ကာ အဖြူရောင် အဖူး၊အပွင့်ပွင့်ပြီး အသီး စတင် သီးပါတော့သည်။ ရွက်နုပြန်ထွက်ခါစ အချိန်တွင် ဒန့်သလွန်ရွက် က ပို၍ချို ပါသည်။ တုတ်ချောင်းပုံသဏ္ဍာန် အသီးတောင့်များသည် ပင်စည်ကိုင်းခတ် များမှ တွဲလွဲခို၍ သီးကြပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒန့် သလွန်ပင် စတင်ပေါက်ရောက်ရာ ဇာစ်မြစ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ဒေ သဖြစ်ပြီး၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် နှင့် အာဖကန်နစ္စတန် စသည့် အပူပိုင်းဇုန်တို့ တွင်လဲ လှိုင်လှိုင်ပေါပါ သည်။ ဒန့် သလွန်သီး အကြောင်း ကို လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀-ကျော် ခန့် က၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆေး သုတေသနပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ ဒန့် သလွန် သီးသာမက၊ အပွင့်၊ အရွက်၊ အစေ့ ၊ အပင်၏ အခါက် နှင့် အမြစ် အပါအ၀င် တစ်ပင်လုံး၏ ထူးခြားဆန်းပြား အံသြဘွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆေးဘက် ၀င်ပုံ ကို လေ့လာသိရှိလာခဲ့ ကြပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဒန့် သလွန်ပင်သည် အရေးပါသော စားသောက်ကုန် သီးနှံ တစ်ခုအဖြစ် အီသီယိုးပီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဆူဒန်၊ အရှေ့ -အနောက်-တောင် အာဖရိက၊ လက်တင် အမေရိက၊ ကာရေဘီယံ၊ ဖလော်ရီဒါ နှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းစု တို့တွင် ကျယ်ပြန့် စွာ စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာပြည်၏ အထက်အညာဒေသတွင် ဒန့် သလွန်ပင်များ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ပေါများလှပါသည်။ မိမိ အိမ်ဝိုင်း၏ နောက်ဖေးမြေကွက်လပ်တွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပါသည်။ ဒန့် သလွန်သီး ရာသီချိန်ရောက်သော အခါတွင် အရသာလဲရှိကာ၊ ရနံ့ လဲမွှေးသည့် ဒန့် သလွန်သီး ကို ဟင်းအမယ် မျိုးစုံချက်ကာ မြန်မာ အိမ်ရှင် မများ လက်စွမ်းပြ လေ့ရှိကြပါသည်။ ဒန့် သလွန်ရွက် နှင့်အဖူးအပွင့်တို့ ကို ဟင်းချို၊ ဟင်းခါး နှင့် အသုပ် အဖြစ် စားနိုင်ပါသည်။ ဒန့် သလွန်သီးကို ငရံ့ (သို့ မဟုတ်) ငရံ့ ခြောက် (သို့မဟုတ်) ကြက်ဥ/ဘဲဥ တို့ ဖြင့်တွဲ ဖက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပဲကုလားဟင်း၊ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒန့် သလွန် သီးတောင့်ကို အစိမ်းလိုက် (သို့ မဟုတ်) မီးကင်ပြီး အတွင်းသားနှင့် အစေ့ တို့ ကို ဇွန်းဖြင့်ခြစ်ကာ ကြက်ဥဖြင့် မွှေကြော်၍သော်လည်းကောင်း၊ (သို့ မဟုတ်) ဘူသီးဖြင့် ကြော်ချက်ဟင်းအဖြစ်လည်းကောင်း အရသာရှိရှိ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံ များတွင်တော့ သူ့ ရိုးရာဒေသအလိုက် ဟင်းလျာအဖုံဖုံကို
ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြသလို ဒန့် သလွန်ရွက် နှင့် အပွင့်တို့ ကို နည်းပညာဖြင့် ပြုပြင်ကာ ကိတ်မုန့် ဖုတ် စားကြပါသည်။
ဒန့် သလွန်သီးနှင့် အရွက်တို့ ထဲတွင် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် protein, carotene, carbohydrates, water, calorie, fiber, fat, vitamin A, vitamin B(choline), vitamin B1(thiamin), vitamin B2(riboflavin), vitamin B3(nicotinic acid), vitamin C(ascorbic
acid), calcium, magnesium, phosphorous, potassium, copper, iron, sulphar, arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine စသည့် ဗိုက်တာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်တို့မြင့်မားစွာပါရှိပါသည်။ အသီးနှင့်အရွက်သာမက အဖူးအပွင့်များထဲတွင်လဲ အဟာရဓာတ်ပမာဏ အမြောက်အများ ပါဝင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဟိုးရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာမှစ၍ ယနေ့ တိုင်အောင် ရိုးရာကုထုံးများတွင် ဘေးဥပါသ်ကင်းဝေးစွာ အသုံးပြု လျှက်ရှိပါသည်။
Trees for Life Organization ၏ မှတ်တမ်းများအရ ဒန့် သလွန်သီးနှင့် အရွက်ထဲတွင်ပါရှိသော--
>> vitamin C သည် လိမ္မော်သီး ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၇-ဆ ပိုသောကြောင့် အအေး မိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ခြင်းကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသည်။
>> calcium သည် နို့ ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၄-ဆ ပိုသောကြောင့် အရိုးနှင့်သွားများကို ခိုင်မာ သန်စွမ်းစေနိုင်ပါသည်။
>> iron သည် ဟင်းနုနယ် ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၅-ဆ ပိုသောကြောင့် သွေးကိုသန့် စေပါသည်။
>> potassium သည် ဌက်ပျောသီး ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၃-ဆ ပိုသောကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအဖွဲ့ အစည်းကို ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါသည်။
>> vitamin A သည် မုန်လာဥနီ ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၄-ဆ ပိုသောကြောင့် မျက်စေ့ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ နှင့် နှလုံး ရောဂါတို့ ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
>> ပရိုတင်း သည် နို့ နှင့် ကြက်ဥ ထဲတွင်ပါရှိသော ပမာဏထက် ၂-ဆ နီးပါး ပိုသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ဆဲလ်များပိတ်ဆို့ မှု တို့ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
(၁) သွေးတိုးရောဂါသည် များအတွက် ဒန့် သလွန်ရွက်နှင့် အသီးတို့ က ဆရာဝန်တစ်ဦးကဲ့သို့အားထားလောက် ပါသည်။
(၂) သွေးကိုသန့် စင်စေကာ၊ သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ချောမွေ့ စေပြီး၊ ခွန်အားလဲ တိုးပွားစေသဖြင့် ကြီးကောင်ဝင်စ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ကလေးများ မှန်မှန်စားသုံးပေးသင့် ပါသည်။
(၃) အရိုးအားကို တိုးပွားစေသည့်အတွက် နို့ စို့ ရွယ်ကလေးငယ်များကိုလဲ၊ ဒန့် သလွန်သီးနှင့် အရွက်ပြုတ်ရည်တို့ ကို အ၀တ်ပါးဖြင့်စစ်ကာ နို့ချိုဖြင့်ရော၍ တိုက်ကျွေးသင့်ပါသည်။
(၄) လှပပြီးမွှေးကြိုင်သော အဖြူရောင် ဒန့် သလွန်ပန်းပွင့် ရနံ့ ကကောင်းစွာ အိပ်မောကျစေနိုင်ပါသည်။
(၅) မွေးဖွားခါနီး မိခင်လောင်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင်နှင့် သံဓာတ်တို့သည် အသီးနှင့် အရွက်များထဲတွင် အလုံအလောက် ပါရှိပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကတည်းက အသီးနှင့် အရွက်တို့ ကို မှန်မှန်စားပေးခြင်းဖြင့် နို့ ရည်လိုက်စေပါသည်။ ဒန့် သလွန်ရွက်ကို ဆားအနဲ ငယ်ဖြင့်ပြုတ်ပြီးနောက် အရွက်ကိုရေစစ်ပြီး ထောပတ်ဖြင့် သုပ်စားပေးခြင်းဖြင့်လဲ နို့ တိုက်မိခင်များ နို့ ရည်
လှိုင်လှိုင်ပေါစေပါသည်။ ထို့ ပြင် သားအိမ်ကို အားရှိစေကာ၊ မွေးဖွားရ လွယ်ကူစသေည့်အပြင် မွေး ဖွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော နောက်ဆက်တွဲ မီးယပ်ဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ ကိုလဲ သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
(၆) အစာချေစံနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး၊ အူရောင် ငန်းဖျားရောဂါ၊ ၀မ်းသွားခြင်း၊ ကာလ၀မ်းရောဂါ၊ ၀မ်းကိုက်ရောဂါနှင့် အသဲရောင်အသားဝါ တို့ကိုလဲ ကောင်းစွာ ကုသပေးနိုင်ပါသည်။ (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁-ဇွန်းစာ ပမာဏရှိသော ဒန့် သလွန်ရွက် သတ္တုရည်ကို ပျားရည်၊ အုန်းရည် အနဲငယ်တြို့ဖင့် ရောစပ်ကာ တနေ့ လျှင် ၂-ကြိမ် မှ ၃-ကြိမ် ခန့် သောက်ပေးရုံဖြင့် ထိုရောဂါများကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်း စေနိုင် ပါသည်)
(၇) ဒန့် လွန်ရွက် သည် penicillin ကဲ့သို့ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ နှင့် အရေပြားပေါ် ရှိ ကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် အူထဲရှိသန်ကောင်များကိုလဲ
ကျစေပါသည်။ အရေပြားမှိုစွဲခြင်းနှင့် ယားနာအမျိုးမျိုးတို့ အတွက်လဲ ဒန့်သလွန်ပင်စည်၏ အခေါက်မှုန့် ဖြင့် လိမ်းကျံ ပေးနိုင်ပါသည်။
(၈) ဖိုမ သဘာဝ ကာမအားအင် ကုန်ခမ်းခြင်းနှင့် မျိုးကန်းခြင်းတို့ အတွက် ဒန့်သလွန်ပန်းပွင့် ကို နို့ ဖြင့်ပြုတ်သောက်ပေးသင့် ပါသည်။
(၉) ဒန့် သလွန်ပင်စည်၏ အခေါက်ကို အမှုန့် ကြိတ်၍ လျက်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများ သုက်ရည်ကျဲခြင်းကို ကုသပေးနိုင်ပြီး၊ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။
(၁၀) ဒန့် သလွန်သီး သည် အသည်းနှင့်သရက်ရွက်တို့ရောင်ကိုင်းခြင်း၊ မေးခိုင်ရောဂါ၊ အာရုံကြော အားနဲခြင်း၊ သွက်ချာပါဒ၊ ပြည်တည်နာ နှင့် အနာကြီးရောဂါ စသည့် ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး တို့ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
(၁၁) ဒန့် သလွန်ပင်၏ အခေါက်ထဲတွင် အစေးများပါရှိပါသည်။ အစာအိမ်နာ ရောဂါသမားများသည် ထိုအခေါက်ကို ပြုတ်သောက်ပေး သင့်ပါသည်။
(၁၂) ဒန့် သလွန်သီးသည် ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ ကို သက်သာကောင်းမွန်စေနိုင် ပါသည်။
(၁၃) ဆီးသွားလွန်ခြင်း ရောဂါအတွက် ဒန့် သလွန်ရွက် သတ္တုရည်ကို သောက်သုံးပေးသင့်ပါသည်။ ကျောက် ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပြသနာများအတွက် ဒန့် သလွန်ရွက် သတ္တုရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁-ဇွန်းစာ ပမာဏထဲသို့ဆားအနဲငယ်ရော၍ မုန်လာဥနီ(သို့ မဟုတ်) သခွားသီး ဖျော်ရည် အနဲငယ်ဖြင့် ရောသောက်ပေး သင့်ပါသည်။
(၁၄) အသက်ရှု လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများအတွက် ဒန့် သလွန်ရွက် လက်တဆုပ်စာကို ဆား၊ ငရုပ်ကောင်း၊ သံပုရာရည် အနဲငယ်ထဲ့ ကာ ရေ ၃ပုံ ၄ပုံ ခန့် ကို အချိန် ၅-မိနစ်လောက် ကြိုချက်ပြီးနောက် အအေးခံကာ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ချမ်းသာမှုကို ရစေပါသည်။
(၁၅) ဒန့် သလွန်သီး နှင့် သံပုရာရည်တို့ ကို ရောကျိတ်ပြီးနောက် ရရှိလာသော အနှစ်ရည်ကို မျက်နှာအနှံ့လိမ်းကျံပေးခြင်းဖြင့် ၀က်ခြံစို၊ ၀က်ခြံခြောက်၊ ဆားဝက်ခြံ၊ မှဲ့ ခြောက် တို့ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး
မျက်နှာအသားအရေကို ၀င်းပလာစပေါသည်။ (သို့ မဟုတ်) လတ်ဆတ် သော ဒန့်သလွန်ရွက် သတ္တုရည်ကို သံပုရာရည်ဖြင့် ရောစပ်၍ လိမ်းကျံပေးနိုင်ပါသည်။
(၁၆) အဆစ်အမြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာများအတွက် ဒန့် သလွန်ရွက်ကို ထောင်း ၍ အုံပေးနိုင်ပါသည်။
(၁၇) ဒန့် သလွန်သီး အစေ့က ရေကိုသန့် စင်ပေးနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိပါသည်။ မိမိအိမ်ရှိ ရေချိုးကန်များ သန့် စင်စေရန်အတွက် ဒန့် သလွန်သီး အစေ့ကို ကျိတ်ချေထောင်းထုပြီးနောက် အ၀တ်ဖြင့်ထုပ် ကာ ရေကန်ထဲသို့ ထဲ့စိမ်ပေးခြင်းဖြင့် သန့် စင်သောရေကို ရှိစေနိုင် ပါသည်။ (ထို့ ပြင် ပျားရည် စစ်- မစစ် ကိုလဲ ဤနည်းဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်)
(၁၈) ဒန့် သလွန်သီးအစေ့မှ အနဲငယ်ချိုသော အရသာရှိသည့် အဆီကို ရရှိပါသည်။ ထိုအဆီသည် ချွဲပျစ်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ဆီချေးစော်လဲ မနံသဖြင့် အသုပ်သုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စက်ဆီ/ချောဆီ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် ထိုအဆီကို အခြေခံ၍ ရေမွှေး၊ ပေါင်ဒါ နှင့် ခေါင်းလိမ်းဆီ အဖြစ်လဲ ထုတ်လုပ်ကြပါသည်။
(၁၉) အီသီယိုးပီးယားကဲ့သို့အာဟာရချို့ တဲ့သော အရပ်ဒေသများတွင် ဒန့်သလွန်ရွက် အမှုန့်က သက်စောင့်ဆေးအဖြစ် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင် ပါသည်။ ဒန့်သလွန်ရွက်အမှုန့် ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အထူးတလည် သိမ်းဆည်းထားစရာ မလိုဘဲ အာဟာရဓာတ် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ ရက်ရှည်လများ ထားနိုင်ပါ သည်။
(၂၀) ဒန့် သလွန် ရွက်သည် ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ချွဲသလိပ်ထခြင်း၊ ပန်းနာရပ်ကျပ် ချောင်းဆိုးဖြင်း၊ တီဘီအဆုတ်နာ နှင့် လည်ချောင်းနာခြင်း ဝေဒနာတို့ အတွက် အလွန်ဆေးဘက်ဝင်ပါသည်။
(၂၁) ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါသည်များနှင့် အဆုတ်ဝေဒနာသည် များသည် ဒန့်သလွန်သီးနှင့် အရွက်ပြုတ် သည့် အခိုးငွေ့ကို ရှုရိုက်ပေးခြင်းဖြင့် များစွာ ကောင်းကျိုးပြုပေးနိုင်ပါသည်။
ဒန့် သလွန်ပင်ကို “ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်တို့ စုဝေးရာအိမ်ကြီး ” ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိဘဲ လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပေးသည့် လက်တစ်ကမ်းမှ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သော ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို လက်လွတ်မခံဘဲ စားသုံးကြစေလို ပါကြောင်း……..။
မှတ်ချက်။(က) အချို့ သော သူများသည် ဒန့် သလွန်သီးနှင့် မွေးရာပါ ဓာတ်မတဲ့ရောဂါ ရှိတတ်သဖြင့်၊ သတိပြုစေလိုပါသည်။ (ခ)ဒန့် သလွန်သီးနှင့် ကလောဥ တို့ ကို တွဲဖက်၍ မစားသင့်ပါ။
ကိုးကား (Power House of Minerials-Drumstick Plant)
ပေါင် ၃၀ ကျော်လေးသည့် ဧရာမရင်သားများနှင့် အမျုိးသမီးအချစ်ကို ရှာဖွေနေ
Tuesday, March 31, 2015 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဖတ်စာများ
အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဖတ်စာများ,
နေပူထဲ ထွက်ရသူတို့ အတွက် နွေကာလ ထိပ်တန်း အသားအရေ ထိန်းနည်း ၁၀
ကော်ဖီ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုများ
စိတ်ဖိစီးမှုများကို နှစ်မိနစ်အတွင်း ဖြေဖျောက်ရအောင်
အမျိုးသားတို့ ခံတွင်း ကျန်းမာပြီး သွားဖြူစင်စေမည့် နည်းလမ်း ၁၀
ရေချိုးခြင်း ကြောင့် ရနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ
ထမင်းကို အအေးခံစားလျှင် ကယ်လိုရီ ထက်ဝက်ကျော်လျော့နဲ
သမန်းကျား၊ ရတနာပုံနေ့ စဉ်
ထမင်းသည် ကယ်လိုရီများပြား သည့်အတွက် ၀မ်းဗိုက်ပိုင်း အဆီစုစေခြင်း၊ အ၀လွန်စေခြင်း တို့ ကို ဖြစ်စေ နိုင်ရာဝယ် အုန်းရည်ဖြင့် ချက်ကာ ရေခဲသေတ္တာ ထဲတွင် နေ့ တစ်ဝက် ခန့် အအေးခံ ထားခြင်းဖြင့် ထမင်းတွင် ပါသော ကစီဓါတ်ကို ခြေဖျက်ရန် အချိန်ပိုယူရသည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အနေဖြင့် ကယ်လိုရီကိုဖြည်းဖြည်း ချင်းသာ စုပ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည့် အတွက် ကယ်လိုရီ မူလ ထက် ၆၀ ရာခိုင်နှူန်း လျော့နဲသွားစေ မည်ဖြစ်ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သုတေသီများက ဆိုသည်။
ကစီဓါတ်ကြွယ်ဝသော ထမင်းကဲ့သို့ စားစရာများသည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝပြီး စွမ်းအင်အရင်း အမြစ်ကောင်းများ ဖြစ်သည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို စားသောက်လိုက်လျှင် အစာခြေစနစ်က သကြား ဓါတ်ဖြစ်သွားအောင် ခြေဖျက် ပြောင်းလဲပစ်သည်။ သကြားဓါတ်ပြောင်းလဲပြီးနောက် ပိုလျံနေသေးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က သိုလှောင်ထားသကဲ့သို့လိုအပ်လျှင် ဂလူးကို့ စ်ဖြစ်အောင် အသွင်ပြောင်းပေးသည်။ သို့ သော် သွေးတွင်းဂလူးကို့ စ် များလွန်းလျင် အဆီဖြစ်သွားကာ ခန္ဓာကိုယ်နေရာ အနှံ့အဆီစုဝေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ၀လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများက ရှင်းပြသည်။
သို့ ဖြစ်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်များက အစားအစာများပါ အဟာရအာနိသင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူမည့် ကယ်လိုရီပမာဏကို ထိန်းချုပ်ကာ ၏သွေးတွင်း သကြားဓါတ်နှင့် ဂလူးကို့ စ် ပမာဏကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်း စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရာ ထမင်းတစ်အိုးကို အုန်းရည်အနည်းငယ် ခပ်ပြီး တည်ကာ ကျက်သွားလျှင် အအေးခံခြင်း ဖြင့် ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်ကလည်း ယူကေသုတေသီများက ပါစတာခေါက်ဆွဲကို ချက်ပြုတ်ပြီး အအေးခံလျှင် ဂလူးကို့ စ်ဖြစ် ပွားမှုနှူန်း လျော့နဲကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ရာဝယ် ယခုအခါ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံသုတေသီများ ကလည်း ထမင်းကိုအအေးခံခြင်းဖြင့် ကာဗိုဟိုက်ဟရိတ်ပမာဏကို ထက်ဝက်ကျော်လျော့ ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ ရှိ ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆန် ၃၈မျိုးကို အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်ချက်ပြုတ် ခဲ့တာပါ။ အုန်းရည်နဲ့ ချက်လိုက်တဲ့ ထမင်းကို တမနက်ခင်း လောက် အအေးခံထားလိုက်ရင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၆၀ ရာခိုင်နှူန်းလျော့ပြီး ဒီနည်းဟာ ထမင်းရဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဟရိတ် ပမာဏကို အများဆုံးလျော့ချနိုင်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်ဟု သုတေသီတစ်ဦး က ပြောပြသည်။
ထမင်းတစ်အိုးထဲကို အုန်းရည် တစ်ဇွန်းလောက်ခပ်ပြီး မိနစ် ၄၀လောက် တည်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၁၂နာရီကြာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၆၀ရာခိုင်နှူန်း လျော့နဲသွား မှာဖြစ် ပါတယ်ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
စကြာဝဋ္ဌာကြီးသည် ခန့် မှန်းထားသည်ထက် စောလျှင်စွာ ပျက်စီးနိုင်ဖွယ်ရှိ
Tuesday, March 31, 2015 သိပ္ပံနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ
ရူပဗေဒ ပညာရှင်များသည် စကြာဝဋ္ဌာကြီးပြန့် ကား ထွက်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး အတွင်းထဲသို့ ပြန်လည် ကျုံ့ ဝင်လာမည့် နေ့ ရက်ကို တွက်ချက်လျက်ရှိရာ လာမည့် နှစ်ပေါင်း ဘီလီယံပေါင်းများစွာ အကြာ တွင် စကြာဝဋ္ဌာကြီးက အတွင်းထဲ သို့ ပေါက်ကွဲ ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မူလကခန့် မှန်းထားသည် ထက် လည်း စောနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
လူသားစံချိန် စံညွှန်းအရ နှစ်ပေါင်း ဘီလီယံပေါင်း များစွာဟူသည်မှာ ရှည်လျား လွန်းလှသော်လည်း နက္ခတ် တာရာ အချိန်စကေးအရမူ စကြာဝဋ္ဌာကြီး ပျက်စီးသွားမည့် အချိန်သည် ရုတ်တရက်ဆို သလို ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရူပ ဗေဒပညာရှင်များ ရှာဖွေနေသော စွမ်းအင်နက်ကြီးသည် စကြာဝဋ္ဌာ ပျက်စီးစေမည့် အစပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူသားတို့အနေဖြင့် ယင်းဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့ မှကြားဝင် ဟန့်တားခြင်းပြုနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ စကြာဝဋ္ဌာကြီး အမှန်တစ်ကယ် အဆုံး သတ်မည့်နေ့ ကို တွက်ချက်နေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း ယူကေနိုင်ငံ၊ နော်တင်ဟမ်တက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ အန်တိုနီယိုပယ်ဒီလာ က ပြောပြ သည်။
စကြာဝဋ္ဌာဟာ အစဉ်သဖြင့် ကျယ်လာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု သူကျယ်ပြန့် နေတဲ့နှူန်းက သိပ်ကိုမြန်နေ ပါ တယ်။ တစ်နေ့ နေ့ မှာ ကျယ်ပြန့် မှုရဲ့ အဆုံးကိုရောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။ စက္ကူချပ်အကြီးကြီး တစ်ချပ်ကို စားပွဲပေါ် ဖြန့် ချလိုက်တဲ့ အတိုင်းပဲ အဆုံးကိုရောက်သွားရင် အတွင်းကိုပြန်လှိမ့်လာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ စကြာဝဋ္ဌာကြီးထဲက ဂြိုလ်တွေဟာ ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တိုက်မိပေါက် ကွဲပျက်စီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကြာဝဋ္ဌာကျယ်ပြန့် မှုနှူန်းဟာ ဘာဖြစ်လို့ မြန်လာတာလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာနေဆဲ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ရူပဗေဒလောကမှာကို အခက်ခဲ အနက်နဲဆုံး မေးခွန်းဖြစ်နေပါတယ်ဟု အန်တိုနီယို က ပြောပြသည်။
၁၉၁၇ခုနှစ်က သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စကြာဝဋ္ဌာကြီး ကျယ်ပြန့် လာနေသည်ကို မသိရှိခဲ့ကြပေ။ ထိုစဉ်က အိုင်းစတိုင်းက cosmological constant ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်၏ လေဟာနယ် သည် တဖြည်းဖြည်းပို၍ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းလာနေပြီး ဒြပ်ဝတ္ထုများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဟန်ချက်ညီညီ ဆွဲဆောင်စေသည် ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက် ၁၀နှစ်ခန့် အကြာတွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အက်ဒ၀င်ဟပ်ဘယ် က စကြာဝဋ္ဌာကြီး ကျယ်လာနေသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ပြီးနောက် အိုင်းစတိုင်းက ၄င်း၏ cosmological constant ကို ပြန်၍ ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ စကြာဝဋ္ဌာကျယ်ပြန့် လာနေသည်မှာ စွမ်းအင် နက်များက လေဟာနယ်ကို တဖြည်းဖြည်း တွန်းရွှေ့ နေ၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ယူဆသည်။
သို့ လျင် စွမ်းအင်နက်များက လေဟာနယ်ကို တွန်းရွှေ့ သောကြောင့် စကြာဝဋ္ဌာကြီး ကျယ်ပြန့် ကားလာနေ လျှင် အဆုံးတွင် ဂြိုလ်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆွဲငင်ထားခြင်း ဟန်ချက် ပျက်သွားပြီး စကြာဝဋ္ဌာကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားနိုင် ကြောင်း သုတေသီများက သုံးသပ်သည်။
Bandwidth ကို သက်သာစေမည့် Chrome extension အသစ်တစ်ခုကို Google ဖြန့်ချိ
Tuesday, March 31, 2015 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Google သည် သုံးစွဲသူ၏ ဝက်ဘ် data usage ကိုလျှော့ချနိုင်မည့် Chrome browser extension သစ်ကို ဖြန့်ချိပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ extension ၏အမည်မှာ Data Saver ဖြစ်ပြီး brow-ser တွင် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိ အချက်အလက် များကိုချုံ့ထားသည့် proxy ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း extension ကိုအသုံးပြုရန် Chrome 41 နှင့်အထက် အသုံးပြု ထားရန် လိုအပ်ပြီး install ပြုလုပ်ပြီးနောက် အဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Data Saver ကို Android နှင့် iOS ရှိ Chrome များတွင်လည်း အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး settings အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ကာ Data Saver ကို enable ပြုလုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Google သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် browser များအတွက် အချက်အလက်များ ချုံ့ထားသည့် ဝန်ဆောင် မှုကို စတင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ Google မှဖြန့်ချိလိုက်သော Data Saver beta ဗားရှင်းသည် အနာဂတ် Chrome ဗားရှင်းများတွင် တစ်ပါတည်း ပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လူတော်မကြောက်သော လူတော် လီကွမ်ယူး
၁၉၆၅ ကမှ လွတ်လပ်ခဲ့သည့် တံငါရွာသာသာ စင်ကာပူ ကို ယနေ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက် ရာတွင် စင်ကာပူခေါင်းဆောင်ကြီး လီကွမ်ယူးသည် တစ်ကိုယ်တော် ကျဲခဲ့သည် မဟုတ်။ အရွယ် ငယ်သလောက် နိုင်ငံကြီးအောင် လူတော်တို့ အားကို ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
အရွယ်လည်းသေး၊ သဘာဝ သယံဇာတ ဆို၍ သောက် စရာရေပင် မရှိသော စင်ကာပူအတွက် အားကိုးစရာမှာ “လူ” သာ ဖြစ်သည်ကို လီကွမ်ယူး စောစောစီးစီး သဘောပေါက်သည်။ “လူ” ဆိုသည်မှာ အလိုလို မိုးပေါ် က ကျမလာ၊ မြေကပေါက် မလာကြောင်းကို သိသော လီကွမ်ယူးသည် လူတော်ကို မွေးတတ်သည်၊ ရှာတတ်ဖွေ တတ်၊ မွေးတတ်သည်၊ လူတော်ကို ပျော်အောင်ထားသည်။ လူတော်ရအောင် နိုင်ငံခြားကပင် ရအောင်ခေါ် သည်။ ၁၉၆၅ နိုင်ငံစထောင်စဉ်က စင်ကာပူသည် နေပျော်ဖွယ်မရှိ မွဲလည်းမွဲ၊ နိုင်ငံလည်းသေး။ စင်ကာပူ မှ တော်သူများပင် စင်ကာပူတွင် မနေလိုကြချိန်တွင် လီကွမ်ယူးသည် ရွာနီးချုပ်စပ် နိုင်ငံများမှ ထူးချွန်သူများ ကိုပါ လိုက်လံရှာဖွေ စည်းရုံးသည်။ မလေးရှားပေါက် မလေးတို့ အင်္ဂလန်တွင် ပညာသင်နေသည် ကို ကျောင်းပြီးလျှင် စင်ကာပူသို့ လာအလုပ်လုပ်စေရန် သူ့လူတို့လွှတ်ပြီး အမျိုးမျိုးစည်းရုံးသည်။ ယခုခေတ် လူငယ် မီးခဲပြာဖုံး ဘောလုံးသမားများကို ကလပ်အသင်းများက လိုက်လံရှာဖွေ စာချုပ်ချုပ်သလိုမျိုး လုပ် သည်။ ခြေသွက် လက်သွက်နှင့် နှစ်ရှည်လများ ပိုးပန်းယူသည်။
လီကွမ်ယူး လူတော်ကို ချစ်ခြင်းမှာ နှစ်ကြောင်းရှိသည်။ နံပါတ်တစ်၊ ခေတ်နောက်ကျနေသော နိုင်ငံကို လူတော်များ မပါဘဲနှင့် တည်ဆောက် မရနိုင်မှန်း သိသည်။ နံပါတ်နှစ်၊ ကိုယ်တိုင်တော် သည့်အတွက် လူတော် မကြောက်၊ “ငါ့နေရာများ လုသွားမလား” ဟု တွေးပူခြင်း မရှိ။
စင်ကာပူ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာချိန်တွင် တက္ကသိုလ်များ ကောင်းအောင် လုပ်ထားပြီး အခြားနိုင်ငံမှ လူငယ်ခြေတက်တို့ သူ့ဆီကျောင်းလာတက်စေရန် ဖန်တီးသည်၊ မြန်မာလူငယ်တို့ ဆိုလျှင် စင်ကာပူ သည် နောက်တစ်ဆင့် တက်ချင်လျှင် သွားရမည့် နေရာအသွင် ဖြစ်လာသည်။ အလုပ်အကိုင် ဈေး ကွက်ကောင်း ဖန်တီးထားသည့် အတွက် ကျောင်းလာ တက်သော နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကျောင်းသား များ သည် ကျောင်းပြီးလျှင် စင်ကာပူတွင် ဆက်နေအလုပ် လုပ်ကြသည်။ ထိုသို့သော လုပ်သားစု လူတော်များ ကို ပြပြီး နိုင်ငံခြား လုပ်ငန်းများ စင်ကာပူတွင် အခြေချစေရန်၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့စေရန် ဆွဲဆောင်နိုင် သည်။ နိုင်ငံခြား လုပ်ငန်းများစွာ ရှိသည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်လိုသော လူတော်များကို ခေါ်ထား၊ ထိန်းထားနိုင်ပြန်သည်။ သို့ဖြင့် စင်ကာပူသည် အခြားနိုင်ငံသားတို့ကို ဆွဲခေါ်ရာ သံလိုက်ကြီးသဖွယ် ဖြစ် လာသည်။
စင်ကာပူသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများက မည်သူတို့တော်သည်၊ ထက်မြက်သည်၊ မည်သူသည် သူ့နိုင်ငံ တွင် ချောင်ထိုး ခံထားရသည်တို့ကို အစဉ်မပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသည်။ အခွင့်ပေါ်သည်နှင့် ထိုသူတို့ ကို လစာ၊ အခွင့်အရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတို့ဖြင့် စည်းရုံးကာ စင်ကာပူသို့ အရောက်ခေါ်ဆောင် တတ် သည်။ သမီးရည်းစားကဲ့သို့ နှစ်ရှည်လများ စိတ်ရှည်လက်ရှည် သုံးနှစ်သုံးမိုးမက ပိုးပန်းတတ်သည့် အတွက် စင်ကာပူ တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီ ဆိုလျှင် ထိုသူတို့ တောင့်ခံရန်မလွယ်။ နောက်ဆုံး လီကွမ်ယူးတို့ အဖွဲ့နောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားကြပြီး စင်ကာပူ တိုးတက်ရေး မဟာစီမံကိန်းကြီးတွင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့ကြရသည်ချည်းသာ။ ထိုသို့ စင်ကာပူ နောက်ပါသွားသူ များတွင် မြန်မာတို့ လည်း အပါအဝင်။
လီကွမ်ယူးသည် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှ ၁၉၉၀ တွင် အနားယူသည်။ သူဝန်ကြီးချုပ် မလုပ်တော့ဘဲ အစဉ်အ ဆက် လွှဲခဲ့သော လူများသည်လည်း လူတော်ချည်းသာ။ သူ့သား လီရှင်လွန်းကို ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သောအခါ မျက်နှာလိုက်သည်၊ ဘုရင်စနစ်လို မင်းဆက်ထောင်သည်၊ လီမင်းဆက် Lee Dynasty ဆိုပြီး ဝေဖန်ကြသော် လည်း သူ့သား Lee Hsien Loong သည် သူ့မျိုးဆက်တွင် အတော်ဆုံးများထဲတွင် ပါသည်။ Lee Hsien Loong နှင့် ယခင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး George Yeo တို့ကဲ့သို့ လူငယ် ခပ်ထက်ထက်များကို လီကွမ်ယူး သည် စနစ်တကျ မြေတောင်မြှောက်သည်။ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေပြီး အတွေ့အကြုံရလျှင် ပြည်ပထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက် တက်စေသည်။ ပြန်လာလျှင် ပိုမြင့်သော တာဝန်များကို ပေးအပ် ဦးဆောင်စေသည်။ သူက ထိုလူငယ်တို့ကို ပိုတောက်ပအောင် အကွက်ဖော်သွေးပေးသည်။ ထိုသို့ ပျိုးထောင် ထားသော လူငယ် လူလတ်များထဲမှ စင်ကာပူအတွက် အနာဂတ် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ မျိုးဆက် တစ်ဆက်ပြီး တစ်ဆက် ပေါ်ထွက်လာသည်။
ယခု လီကွမ်ယူး သေသွားသော်လည်း နဂိုကတည်းက လူတော်တို့ကို နေရာပေး၊ နောက် လူတော်မျာ ထွက်အောင် စနစ်တကျ စီမံခဲ့သောကြောင့် စင်ကာပူသည် ရှေ့ဆက်တိုးတက်ဦးမည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင် လုပ်ခွင့်မရသည်များကို လုပ်ရန် အခြားနေရာမှ လူတော်တို့လည်း စင်ကာပူသို့ သွားကြဦးမည်။ စင်ကာပူသည် လူတော်များရှိသော လူတော်များ အုပ်ချုပ်သည့် လူတော်နိုင်ငံအဖြစ် အခြားနိုင်ငံများ၏ အထက်တွင် ရပ်တည်နေဦးမည်။
အခြားသူများထံမှ လူကိုခေါ်ရန် အသာထား၊ ကိုယ့်ဆီမှလူကို ဘယ်လိုထိန်းရမှန်းပင် မသိသော၊ ပျော်အောင် မထားနိုင်သော နိုင်ငံများသည် ယခုကဲ့သို့ Knowledge Age တွင် ကြီးပွားရန် မလွယ်။ လူတော်တို့ ရအောင် ခေါ်နိုင်၊ ထိန်းနိုင်မှ အခြားသူများနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူတော်များ စင်ကာပူနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံ အများအပြားသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း လေးငါးခြောက်ဆယ်အတွင်း ပုံမှန်ဆုံးရှုံးနေသည်။ ဦးနှောက် ယိုစီးမှုဒဏ် အခံရ ဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်သည်။ အခြားနိုင်ငံမှ လူတော်ကို ဆွဲခေါ်ရန် နေနေသာသာ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှလူကို မှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့် ထိန်းမထားနိုင်ကြ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက မလိုလားသဖြင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ထွက်သွားသော လူတော်တို့သည် တိုင်းတစ်ပါးမြေတွင် အစွမ်းပြကာ ကမ္ဘာကျော် ကုန်၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အရာရောက်သူများ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ စိတ်ကို တုံးတုံးချ ကာ ပြည်တွင်းတွင် အခြေချသော ကျန်ကောင်းကျန်ရာ လူတော်တို့ကိုလည်း နေရာမှန်၊ လူမှန်မထားနိုင် မထားရဲ မထားတတ်သဖြင့် သူတို့၏ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို နိုင်ငံက မသုံးလိုက်ရဘဲ ဦးနှောက် အလဟဿ (Brain Waste) ဖြစ်ကုန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် လူတော်ပြေးစေသော အကျင့်အကြံများကို နှစ်ငါးဆယ်ခြောက်ဆယ် အတွေ့အကြုံဖြင့် လုံးဝစွန့်လွှတ်သင့်ပြီ။ လူတော်ရှာ၊ လူတော်မွေး၊ လူတော် ထိန်းနိုင်မှသာ အခြားနိုင်ငံတို့နှင့် ကျားစီးဖားစီး ယှဉ်နိုင်မည်။ သူများတစ်လှမ်း ကိုယ်ဆယ်လှမ်း လှမ်းနိုင်သော ကိုယ့်လူများကို ရန်သူထင်ပြီး မကြောက် ပါနှင့်။ ထိုသူတို့ကို ကိုယ်မသုံးလျှင် တစ်ပါးနိုင်ငံက အသင့်သုံးသွားပေလိမ့်မည်။ ကိုယ့်အနားကပ်နေသော လီကွမ်ယူးနှင့် စင်ကာပူက ဥပမာဖြစ်သည်။
မူးယစ်သုံးစွဲသူများ နှင့် ဆေးကုသခွင့်
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ အား ပြစ် ဒဏ် လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်ရန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မူးယစ် ဥပဒေအား ပြန် လည် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ သွား မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ ရေးဆွဲရာတွင် ထောင်ဒဏ် အစား သုံးစွဲသူမှ ဆေးပြတ်သည် အထိ ဆေးရုံ တက်၍ ကုသသည့် ပြစ်ဒဏ် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်လျက် ရှိသည်။
““သုံးစွဲတဲ့ သူတွေကို ထိခိုက် နစ်နာမှုတွေ မရှိအောင် ဥပဒေကို ပြန်ပြင်မှာပါ။ သူတို့ကို တရားခံလို့ မသတ် မှတ်ဘဲ လူနာအနေနဲ့ပဲ ထားရှိသွားမှာပါ”” ဟု မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်းရေး (ဗဟို) မှ ဒုရဲမှူး ကျော်ကျော်မင်းက ပြောသည်။
သို့သော် ဆေးကုသနေချိန် ပုံမှန် ကုသခြင်း မရှိသူများနှင့် လွှတ်ပေးလိုက် သော်လည်း ထပ်မံ သုံးစွဲ သူများ ကိုမူ လက်ရှိတွင် အရေးယူ ဆောင်ရွက် နေသကဲ့သို့ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ဒဏ်ဖြင့်သာ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူများကို ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းသည် ကောင်းသည့် လက္ခဏာ တစ်ခု ဖြစ်သော် လည်း ရောင်းချသူများကိုမူ ပြစ်ဒဏ် ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ လိုအပ်လာပါက ပြစ်ဒဏ်ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်းရေး (ဗဟို) ထံမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချနေသူများအား ၁၉၉၃ ခုနှစ် မူးယစ် ဥပဒေအရ အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ချမှတ်ပြီး သုံးစွဲသူများ အား အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်ချမှတ်ကာ အရေးယူ ဆောင် ရွက် နေကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်းရေး (ဗဟို) ထံမှ သိရသည်။
““အခုနောက်ပိုင်းဆို ဆေးဝါးတွေကလည်း စုံလာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆေးဖြတ်သူတွေ အတွက် အရမ်း အဆင်ပြေတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲတာ ကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် ဆေးရောင်းတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အခွင့် အရေး တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်”” ဟု စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကု ဒေါက်တာ အောင်မြတ်ကျော်စိန်က ဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများအား ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေးလိုက်ပါက သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ကြောက်ရွံ့ စိတ် မရှိတော့ဘဲ ပိုမိုအတင့် ရဲလာနိုင်သည့် အပြင် သုံးစွဲသူ အရေအတွက် မှာလည်း တိုးပွား လာနိုင်သည့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယင်းဥပဒေသစ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်တောက် လိုသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းအား စွန့်လွှတ် လိုသူများ အတွက်ကိုမူ များစွာ အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး သည် ဒွန်တွဲနေသောကြောင့် ဥပဒေ များရေဆွဲကာ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
““မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းတဲ့အခါ သုံးတဲ့သူထက် ရောင်းတဲ့ သူတွေကို ပဲ အဓိကထားပြီး ဖမ်းဆီးနေတာ။ အဲဒါကြောင့် သုံးတဲ့ သူတွေကို ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေးတာ သိပ်တော့ စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး”” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများအား ထောင်ချခြင်း မရှိဘဲ ဆေးကုသခွင့် ပေး ထားပြီး၊ ထိုသို့ ဆေးကုသခွင့် ပေးရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း ရှိသကဲ့သို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆေး ကုခြင်းများလည်း ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း နိုင်ငံတကာ နည်းအတိုင်း ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဆေးဖြတ်ရာတွင် နိုင်ငံတော် စရိတ်ဖြင့် ကုသပေးမည် ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မိမိစရိတ်ဖြင့်သာ ကုသခြင်း ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
““ဆေးသုံးတဲ့သူ အများစုက ဆေးရုံတက်ပြီး ဖြတ်လည်း ဆင်းလာရင် ပြန်လုပ်ကြတာပဲ။ အဓိက မသုံးဖြစ်အောင် ကြိုတင်တားဖို့ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အပေါ် မူတည်တယ်”” ဟု မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲဖူးသူ ကိုအောင်လေးက ဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲရာတွင် ဆေးခြောက်၊ WY ၊ ဘိန်းဖြူ စသည်တို့ကို အများဆုံး သုံးစွဲကြပြီး ၄င်းတို့ အနက် ဘိန်းဖြူ သုံးစွဲမှုမှာ ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသည့်အပြင် ဆေးဖြတ်ရာတွင်လည်း မလွယ်ကူကြောင်း ဆေး သုံးစွဲသူ လူငယ်များထံမှသိရ သည်။
ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူ အနည်းစုသာ ဆေးပြတ်သော်လည်း အများစုမှာ ဆေးပြတ်တောက်ခြင်း မရှိ၍ မူးယစ် ဥပဒေသစ် အရ ဆေးသုံးစွဲသူများအား ဆေးရုံတက်၍ ကုသပေးခြင်းမှာ ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ကြောင်း လူငယ်များက ဆိုသည်။
““အပြင်မှာ ရှိတုန်းကလည်း ငွေကုန် စိတ်ဆင်းရဲရတာပဲ။ အခု ထောင်ထဲ ရောက်နေတော့လည်း ကုန်ကျ စရိတ်တွေက များတာပဲ။ သူ့ကြောင့် တစ်အိမ်သားလုံး ဒုက္ခရောက်နေရတယ်”” ဟု မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲ မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ တစ်ဦး၏ မိခင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်းက ပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမိပါက နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုးကျိုးများ ခံစား ရမည့်အပြင် မိသားစုဝင်များအတွက် လည်း စိတ်သောက ရောက်ရှိရမည် သာ ဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေး အတွက် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အသိပညာပေးခြင်း၊ တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း တို့အပြင် မိသားစုဝင် များကလည်း ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒုရဲမှူး ကျော်ကျော်မင်းက ဆိုသည်။
““လူငယ်တွေ မူးယစ်ဆေးမစွဲ ဖို့ အဓိက မိသားစုဝင်တွေက သေချာ စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အပြင် သုံးစွဲနေ ရင်လည်း နောက်မသုံးဖို့ စည်းရုံး သိမ်းသွင်းဖို့လိုမယ်”” ဟု ဒုရဲမှူး တစ်ဦးက ဆိုသည်။
မိသားစုဝင်များ အနေဖြင့် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိပါက သုံးစွဲ မိသူများမှာ မူးယစ် ကျေးကျွန် ဘ၀ သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် အပြင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာကာ နောက်ပိုင်းတွင် အသက် ဆုံးရှုံးရခြင်းများ ဖြစ် လာနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် မူးယစ်ဆေး အသုံးပြုနေကြောင်း သိရှိရပါက ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မူးယစ် ဆေးကုသရေး ဌာနကြီး (၂၆)ခု နှင့် ဌာနငယ် (၄၀) ခုတို့တွင် သွားရောက် ကုသနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။
အစိုးရသစ် တာဝန်ယူချိန်မှ စ၍ ၂၀၁၄ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း အထိ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုပေါင်း (၁၅၇၇၀) မှု ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးရာတွင် WY ၊ ဆေးခြောက်နှင့် ဘိန်းဖြူတို့မှ အများဆုံး ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရရှိမှု မှာ နှစ်စဉ် တိုးမြင့်လာလျက်ရှိပြီး အများဆုံး ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဒေသများမှာ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒေသများမှာ ဘိန်း စိုက်ပျိုးမှု အများဆုံး ဒေသများဖြစ်ပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု၊ ငွေ ရလွယ်မှု တို့ကြောင့် ဒေသခံများမှာ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း အတွက် ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းကို စွန့်လွှတ်ရန် မလွယ်ကူကြကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သိရသည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံ အများစုမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး၏ သားကောင်များ ဖြစ်နေကြရပြီး လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်နေကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း များထံမှ သိရသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ် မူးယစ်ဆေးဝါး ဥပဒေ ပြန်လည် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ အတွက် ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ပေးရန် စီစဉ်နေခြင်းမှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကို သေချာစွာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။
ထိုသို့မဟုတ်ပါက ခုတ်ရာ တခြား ရှရာ တလွဲဖြင့် ဥပဒေကို အခွင့်ကောင်းယူကာ သုံးစွဲမှုများ ယခင်ကထက် ပိုများလာမည့် အချက်ကိုလည်း မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်သာ ဖြစ်သည်…။
ဂျပန် သက်ကြီးပိုင်းတွေကို ဘယ်သူတွေ ပြုစု စောင့်ရှောက်ကြမလဲ
မီဒိုရီအီဒါ တစ်ယောက် အသက်(၉၆) နှစ်အရွယ် အဘွားဖြစ်သူကို အိမ်သာ လိုက်ပို့ဖို့ တစ်ည တစ်ည ကို အကြိမ်ကြိမ်ထ ရသည်။ အဘွား အိပ်သာ သွားချင်တိုင်း အမြန်ဆုံး လိုက်ပို့ပေး နိုင်အောင် အဘွားဘေးမှာ ပဲသူ အိပ်လိုက်သည်။ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး အများစု သဘောကျ နိုင် စရာ မရှိသည့် တာဝန် ၀တ္တရားမျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် မီဒိုရီ အဖို့ သူ့ အဘွား အတွက် တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် သာ ထိုသို့ လုပ်ပေးနိုင် သဖြင့် အပြစ်မကင်း သလိုပင် ခံစားနေ ရသည်။ မီဒိုရီသည် တစ်ပတ်မှာ ခြောက် ညကိုအခြားသော သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး စင်တာ များတွင် လုပ်ကိုင်ရပြီး နားရက် တွင်သာ သူ့အဘွားရှိ ရာဂေဟာတွင် လာအိပ်ပေး နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်မ မိသားစုကလည်း မချမ်းသာတော့ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရ တာပေါ့။ အဘွားနဲ့ တူတူ ညတိုင်းနေ မပေးနိုင် တာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး ဟု မီဒိုရီက ပြောသည်။ ကျွန်မ (၁၅) နှစ်သမီးမှာ အဘိုးဆုံးတယ်။ အဘိုးဆုံး ကတည်းက ငါ သူနာပြု လုပ်မယ်လို့ ရည်မှန်းချက်ထား ခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် အခု လုပ်နေတဲ့ သူနာပြု အလုပ် ကိုလည်း ကျွန်မ မြတ်နိုးတယ်။ ဒီအလုပ်ကို မစွန့် ချင်ဘူး ဟု မီဒိုရီက ပြောသည်။ သူနာပြု အလုပ်ကြောင့် သူပေးဆပ်လိုက် ရတာများရှိသည်။ မီဒိုရီက ပြည်ပထွက် ပြီးလည်း လုပ်ကိုင်ချင် သေးသည်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြည်ပနိုင်ငံတွေဆီ သွားပြီး လုပ်ကိုင်နေတာ သူအားကျ သည်။ နိုင်ငံတကာကို ခြေ ဆန့်နိုင် သူများမို့ အမြင် ကလည်း ကျယ်ကြသည်။
ကျွန်မ နိုင်ငံခြား ထွက်ချင်တဲ့ အကြောင်းတော့ အဘွားကို မပြောပြဘူး။ အဘွား စိတ်ဆင်းရဲ သွားမှာ စိုးတယ်။ ခက်တာက ကျွန်မလည်း အခု အသက် (၃၀) နားကပ် နေပြီ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ပိုင် မိသားစုလေး ထူထောင်သင့်တဲ့ အချိန်ရောက် နေပြီ မဟုတ်လား ဟု မီဒိုရီက ဆိုသည်။ ဒီလို ပြောလို့ အဘွားနားက ခွာချင်တယ်ရယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ညည အဘွား အိမ်သာသွားဖို့ ကျွန်မကို လာမနှိုးတော့ မယ့် နေ့မျိုးရောက် မလာပါစေနဲ့လို့ ကျွန်မအမြဲ ဆုတောင်းနေတယ်။ အဘွားအသက် (၁၀၀) ပြည့်မွေးနေ့ ကို ပျော်ပျော်ကြီး ကျင်းပချင်သေးတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မိသားစုထဲက သက်ကြီးပိုင်းများကို ပြုစု စောင့်ရှောက်သည့် တာဝန်ကို ယူထားကြသော အသက် (၁၅) မှ (၂၉) နှစ်ကြား လူငယ် (၁၇၇၆၀၀) ဦးအနက် မီဒိုရီသည် တစ်ဦး အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ မီဒိုရီလို ကိုယ်တိုင်က သူနာပြု ဘ၀ကို ကျေနပ်ကာ လုပ်နေသူများလည်းရှိသည်။ မလွှဲမရှောင်သာ၍ အချိန်ပြည့် ပြုစု စောင့်ရှောက်သူ အဖြစ် ခံယူထားရသူ များလည်း ရှိကောင်းရှိ လိမ့်မည်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သက်ကြီး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာသို့လည်း မသွားနိုင် သဖြင့် အိမ်မှာပင် သက်ကြီးပိုင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စောင့်ရှောက်နေ ရသည့် အိမ်ထောင်စုတွေ လည်း ရှိနေပြန်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လကပင် အသက်(၇၁) နှစ်အရွယ် ခင်ပွန်းက စိတ်ကျဝေဒနာ ဖြစ်ပွားနေ သော ဇနီးသည်အား သတ်ဖြတ်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ ရသည်။ မုန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ရှည်လများ ပြုစု စောင့်ရှောက်နေရ တာကို အရမ်းငြီး ငွေ့လာလို့ပါ။ ဒါကြောင့် သတ်လိုက်ရ တာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် လည်း သတ်သေဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် ဟု အသက်(၇၁) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးက ပြောသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်မျိုးသည် ဂျပန်၏ အလွန်အမင်း တိုးပွားလာ နေသော သက်ကြီးရွယ်အို ၀န်ပိမှု ပြဿနာကို မီးမောင်း ထိုးပြ နေသည်။ သက်ကြီးပိုင်း တွေက များလာ နေသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် မွေးနှုန်းများက ကျဆင်း နေ သည်။ အကျိုးဆက် အဖြစ် ဂျပန်သည် သက်ကြီးပိုင်း များကို ပြုစု စောင့်ရှောက်မည့် လူရှားပါး သထက် ရှားပါးလာ နေသည်။
ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း သည် အသက်(၆၅)နှစ်ကျော်များ ဖြစ်သည်။၂၀၅၅ ခုနှစ်ရောက်သည့် အခါ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း အထက် ထိ ရောက်ရှိလာမည်ဟု လူဦးရေ တွက်ချက်မှုများအရ သိရသည်။ မွေးနှုန်း များ ကျဆင်းနေသဖြင့် လက်ရှိတွင် ဂျပန် လူဦးရေသည် (၁၂၇) သန်းရှိ နေရာမှ ၂၀၅၅ ခုနှစ် ရောက်သည့် အခါ သန်း(၉၀) သာကျန်တော့ မည်ဟုလည်း သိရသည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်ရောက် သည့်အခါ ဂျပန်နိုင်ငံသည် သူနာပြုနှင့် သက်ကြီး ရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး ကျွမ်းကျင်သူ တစ်သန်းကျော် ထပ်မံ လိုအပ်လာမည်ဟု ဂျပန် ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် ပြည်သူ့ ဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာနက သတိပေး ပြောကြားသည်။
ပြည်ပ ကနေ လူခေါ်မလား
ဂျပန်တွင် လူဦးရေကျုံ့လာမှုကို ဖြေရှင်းရန် အလွယ်ဆုံးနည်းကား ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ လာရောက် လုပ်ကိုင် မည့် လူများကို များများ စားစား လက်ခံ လိုက်ဖို့ ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းက လွယ်ကူ သော်လည်း လူကြိုက် မများသော နည်းလမ်း ဖြစ်နေသည်။ ဂျပန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြည်ပ နိုင်ငံသား အနည်းဆုံး နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ (၂)ရာခိုင်နှုန်းသာ ပြည်ပ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ပမှ လူ အများအပြားကို အချိန်တိုအတွင်း နိုင်ငံသို့ ၀င်ခွင့်ပေး လိုက်မည် ဆိုပါက လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလာ မည့် အန္တရာယ်လည်းရှိ နေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားသား သူနာပြုများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး ၀န်ထမ်းများကို ဂျပန်သို့ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေး သတ်မှတ်ချက် များ ကလည်း မြင့်မားသည်။ အလုပ်အကိုင်စာမေးပွဲကို ၀င်ဖြေခဲ့ ကြသော ပြည်ပ နိုင်ငံသား များစွာ အနက် (၃၀၄) ဦးသည်သာ အောင်မြင်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ၎င်းတို့၏ ယာယီအိမ်အဖြစ် သဘောထားကာ နေ ထိုင်နိုင်ခဲ့ ကြသည်။
နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားများ ဂျပန်ကို အိမ်လို သဘောထားကာ နွေးထွေးစွာ နေနိုင်အောင် ဖန်တီးပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအဘေးက ကတိပြု ပြောကြား ထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြား သား များကို ဂျပန်တွင် အချိန်ကြာကြာ နေခွင့်ပေးမည် မဟုတ်ဘဲ သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ် အတွင်း ပြည်တော်ပြန် ရမည်ဟု သတ်မှတ် ထားသည်။
အစိုးရရဲ့ လုပ်ပုံတွေက ဂျပန်နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူဦးရေကျုံ့မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူး ဟု ဂျပန်နိုင်ငံ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အကြီးအကဲ ဟိုင်ဒါနိုရီ ဆာကာနာကီက ပြောသည်။ ဂျပန်ဟာ လာမယ့် နှစ်ငါးဆယ် အတွင်း ပြည်ပက ပြောင်းဝင် နေထိုင်သူ(၁၀) သန်း လောက်ထိကို လက်ခံပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးမှ နိုင်ငံ ပုံမှန် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နိုင်မယ် ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ဂျပန်ဟာ ဘက်စုံ အခြေအနေတွေ ကြောင့် လူမျိုး တစ်မျိုးတည်း နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ တာကြောင့် လူမျိုးစုံနိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်ရမယ် ဆိုတာ ယနေ့ လူငယ်တွေကို အချိန်ယူ ပညာပေး သွားမယ် ဆိုရင် လူမှုရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဂျပန်ဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း ရေရှည် နေထိုင်လာခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ခုချိန်မှာ အခြေအနေအရ လူမျိုးစုံ နိုင်ငံ အဖြစ်ကို ကူးပြောင်း နိုင်ပါမှ အရှိန်မပျက် ဆက်လည်ပတ်နိုင်မယ့် အနေအထား ရောက်နေ ပါတယ် ဟု မီဇူဟို နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ ဆိုင်ဂျီရို တာကီရှီတာက ပြောသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လူမျိုး တစ်ခုတည်း မူဝါဒလည်း မပျောက်ကွယ်စေ၊ လူမျိုးစုံဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းနိုင်စေဟူသော အလယ်အလတ် လမ်းစဉ် တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ဥရောပ၏ လူမျိုးစုံ မူဝါဒ မအောင်မြင်ပုံကို ယခုနောက်ပိုင်း ကြီးထွား လာသော လူမျိုးရေး ပြဿနာများက မီးမောင်းထိုးပြ နေကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မီဒိုရီလို အဘွားကို ပြုစု စောင့်ရှောက် ရတာ ပျော်သူက အနည်းစုသာ ရှိလိမ့်မည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေး မည့်သူ ရှာမရခြင်းကြောင့် ကိုယ်တိုင် ၀င်ပြုစုနေရ သူတွေလည်း ရှိလိမ့်မည်။ မီဒိုရီ၏ အဘွားက ကံကောင်း သေးသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့် မြေး ရှိနေ သေးသည်။ သားထောက်သမီး ခံလည်း မရှိ၊ ဘေးဝန်းကျင်မှာလည်း လူငယ်ရှားပါးသဖြင့် ပြုစုမည့်သူပင် ရှာမရနိုင်ဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း ခရီးဆက်နေ ရသည့် သက်ကြီးရွယ်အို များလည်း ရှိနေသည်။ လူဦးရေ ကျုံ့လာနေသော ဂျပန်တွင် ထိုပြဿနာက ကြာလေ ဆိုးလေ ဖြစ်လာနေသည်။ ဂျပန်အနေဖြင့် အဖြေတစ်ခု မြန်မြန်ရှာဖို့ လိုနေပြီ။
Ref: Who will look after Japan]s elderly? By Mariko Oi (BBC)
ညအမှောင်ထဲမှာ မြင်နိုင်တဲ့ ဆေးရည်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ တီထွင်
အလင်းရောင်း လုံးဝမရှိတဲ့ ညဘက် အမှောင်ထဲမှာ အရာ ဝတ္ထုတွေကို မြင်စေနိုင်မယ့် ဆေးမင်ရည် တစ်မျိုးကို ကယ်လီဖိုးနီးယားက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးတွေမှာ ညဘက်အခါကြည့် တဲ့ ညမြင်ကွင်း(Night version) ပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ညဘက်ကို မျက်လုံးမြင်စေနိုင်တဲ့ ဒီဆေးရည်ကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ ညဘက်မြင်နိုင်တဲ့ဆေးရည်ကို မျက်လုံးထဲ ထိုးသွင်း လိုက်တဲ့အခါ အလင်းရောင်း လုံးဝမရှိတဲ့နေရာ မှာတောင် မီတာ ငါးဆယ်လောက် အထိ ရှေ့ ကို မြင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးရည် အာနိသင်ဟာ ခုနှစ် နာရီလောက်အထိ ကြာရှည်ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေကို အမှောင်ထဲမှာ ထင်ထင် ရှားရှား မြင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Chlorine e6 လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဆေးရည်ကို ပင်လယ်နက် ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ ငါးမျိုစိပ်ဆီက ရတဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ တီထွင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငါးတွေဟာ အလင်းရောင် ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
ဒီဆေးရည်ထိုးပြီး ရက်ပေါင်း ၂၀ လောက်အထိ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ကာယကံ ရှင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်မြင်နိုင်တဲ့ဆေးရည် တီထွင်မှု အလုံးစုံအောင်မြင်သွားရင်တော့ ညဘက်မှာ အလင်းရောင်မရှိတဲ့ နေရာမှာ လူတွေအခက်အခဲမရှိ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Planet Myanmar News
မိ​မိချစ်ခ​င်ြ​မ​တ်နိုး​သူများ ကွယ်လွန်သွား​လျှ​င် ထာဝရ​ရှင်သ​န်နိုင်မ​ည် န​ည်း​ကို တီ​ထွ​င်
ဘာစီလိုးနား၊ မတ် ၂၂
စပိန်နိုင်ငံ၊ ဘာစီလိုနားမြို့မှ Bios Urn ဆိုသည့် အဖွဲ့သည် လူများ ကွယ်လွန်သွားလျှင် ဘဝဆုံး သွားပြီး ယူဆခဲ့သည့် အတွေး အမြင်ကို ပြောင်း လဲနိုင်ရန်အတွက် သေသော်လည်း ထိုသူများ၏ အရိုးပြာများကို ကျောက်အိုးလေး တစ်လုံးအတွင်း ထည့်ပြီး သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးကာ သေသူ့ကိုယ်စား ထာဝရရှင် သန်နေသော သစ်ပင် တစ်ပင် အဖြစ်ပြောင်းပြီး သဘာဝ စိမ်းလမ်းစိုပြည် ရေးကိုပါ ဦးစားပေး ရာရောက်သည့် နည်းစနစ် တစ်ခုကို တီထွင်ပြီး တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေး လျက်ရှိကြောင်း Mail Online သတင်း တွင်ဖော်ပြ ထားသည်။
အထူး စီမံပြုလုပ်ထားသည့် ကျောက်အိုးလေးများအတွင်း ကွယ်လွန်သူ၏ ပြာမှုန့်များကို ထည့်ထားပြီးနောက် သစ်စေ့ တစ်စေ့ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်လျှင် ဘဝသေသွားပြီး ဆိုသည့်အစား ပြန်လည် ရှင်သန်လာသော ဘဝပေါင်းများစွာ အဖြစ် ဖန်တီး မှတ်ယူလာနိုင်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
ယင်းစနစ်အရ ကျန်ရစ်သော မိဘဆွေမျိုးများသည် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သစ်ပင်မျိုးကို ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပြီး ပြာမှုန်နှင့် သစ်စေ့ကို အပေါ်ယံတွင်သာ ထည့်သွင်းပေးရန် လိုကြောင်း၊ ကျောက်အိုး အောက်ခြေတွင် နည်းပညာဖြင့် အထူးပြုလုပ်ထား သော စနစ်များအရ ထိုကျောက်အိုးကို တစ်ရက်လျှင် နေရောင်ခြည် သုံးနာရီမျှ ပေးရုံဖြင့် အပင်ပေါက် လာစေရန် စီစဉ်ထားကြောင်း Mail Online သတင်းတွင် ရေးသားထား သည်။
Bios Urn ကျောက်အိုး တစ်လုံးကို အပြီးအစီး လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပေးပို့ခ စရိတ်အဖြစ် ၁၄၅ ဒေါ်လာယူကာ ယင်းအဖွဲ့သည် လုပ်ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။
အလားတူ လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို Urban Death Project အနေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လူ တစ်ယောက်သေ ဆုံးပါက သူ၏ အလောင်းကို ခြောက်ပတ်အတွင်း မြေသြဇာအဖြစ် ပြောင်းပေးလိုက်ကာ အဆောက်အအုံကြီး များဘေးတွင် သစ်ပင်ကို ယင်းမြေသြဇာကျွေးပြီး ကြီးထွားအောင် လုပ်ပေးသည့် အစီအစဉ်ဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ ဖူးသည်။
ကမ္ဘာ့အပါးဆုံး ဘက်ထရီ တီထွင်အောင်မြင်
ဆိုးလ်၊ မတ် ၂၆
ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် ဓာတ်ခဲဆိုလျှင် ကြီးမှ ကြာ ရှည်စွာ သုံးနိုင်သည် ဆိုသော အယူအဆ ကို ပြောင်းလဲနိုင် ရန်အတွက် လူတို့ကိုင် ဆောင်နေသော ကြွေးဝယ်ခွင့် ကတ်ထက်ပင် ပါးသည့် ဘက်ထရီတစ်မျိုးကို တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက တီထွင် နိုင် ခဲ့ကြောင်း Science ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ခေါက်ကွေးနိုင်ပြီး ခရက်ဒစ်ကတ်ထက်ပင် ပါးလွှားသည့် ယင်းဘက်ထရီလေးမှာ အထူ 0.5mm ခန့်သာ ရှိပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ KAIST ကုမ္ပဏီမှ ယန်ဝုခ်ချောင်နှင့် အဖွဲ့က တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
ယင်းဘက်ထရီပြားတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည့်စနစ်ကို "coplanar interdigitated structure" ဟုခေါ်ပြီး နာနိုချပ်အပြားများကို အလွှာလိုက်ထပ်ကာ သိပ်သည်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တီထွင်သူ ယန်ကပြောကြားသည်။
ဘက်ထရီတွင် ပါဝင်ရသည့် လျှပ်ငုတ်များကို ဘေးချင်းယှဉ်ပြီးထားနိုင်လိုက်သောကြောင့် အလွန်ပါးလွှာစွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့ သည့်အပြင် စွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း အလွန်မြင့်မားလာစေခဲ့သည်။
ဘက်ထရီသစ်သည် ဗို့အား 7.4V အထိ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အပြားချပ်အတွင်း အခွေပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဖြင့် သိပ်သည်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခြင်းမှာ ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။
ကတ်ဘက်ထရီစနစ်ကို လက်ပတ်နာရီများ၊ စမတ်ကတ်များ၊ မျက်မှန်များနှင့် တွဲဖက်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မကြာသော ကာလတွင် လူသုံးမိုဘိုင်းလ် ပစ္စည်းများတွင် ကြီးမားသည့် ဘက်ထရီများအစား ကတ်ဘက်ထရီ များကို အစားထိုး သုံးကြရသည့် စနစ်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ကြောင်း Science သတင်းတွင် ရေးသား ထားသည်။
Facebook ထုတ် Messenger ကြောင့် အီးမေးလ် ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ဟုဆို
ဝါရှင်တန်၊ မတ် ၂၆
ကမ္ဘာကျော် ဆိုရှယ်ကွန်ရက် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည့် Facebook စာမျက်နှာ များပေါ်တွင် Messenger ဟုခေါ်သည့် အပြန်အလှန် စာပို့ဆက်သွယ်နိုင်သော စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေး လိုက်သောကြောင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေးမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူ လာပြီး မကြာမီ ယခင်က သုံးစွဲခဲ့ကြသည့် အီးမေးလ်စနစ် ကွယ်ပျောက်သွားမည် ထင်ကြောင်း AP သတင်း တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Facebook ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စာပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ရက် လမ်းကြောင်းမှ ခွဲထွက်ပြီး သီးခြား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်စေရေး ကြံဆောင်နေသောကြောင့် မကြာမီ အစဉ်အလာအရ သုံးစွဲနေကြသည့် အီးမေးလ်စနစ်ကို ထိခိုက် လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့်နည်း Messenger ဖြင့် ဆက်သွယ်နည်းကို ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် ကျင်းပနေ သည့် Developer ညီလာခံတွင် Facebook ကိုထူထောင်သူ မာ့ခ် ဇက်ကာဘတ် ကိုယ်တိုင်က သရုပ်ပြ ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပြီး ယခုအခါ Messenger ကိုအသုံးပြုနေသူပေါင်း သန်း ၆၀၀ ခန့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြား သည်။
Messenger ဆော့ဖ်ဝဲတွင် အခြားအသုံးပြုနိုင်မှု မျိုးကွဲပေါင်း ၄၀ ခန့်ရှိပြီး မကြာမီ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် သတင်း၊ အထူးပြုလုပ် ချက်များကို ပူးတွဲပို့နိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Facebook က ရှင်းလင်းထား သည်။
နောက်ဆုံးထုတ် Messenger ကို စာပို့ရုံလောက်အဆင့်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကုန်အမှာ၊ စုံစမ်း၊ သတင်းပေး အွန်လိုင်း အရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်းများ အတွက်ပါ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အနေအထား တစ် ခုဖြစ်စေရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ Facebook တစ်နေရာတည်းတွင် တစ်ထိုင်တည်း အားလုံး အသုံးပြုနိုင်စေ ရန် လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇက်ကာဘတ်က ဆိုသည်။
Messenger ကို တာဝန်ရှိသူများသည် စာပို့ဆက်သွယ်နိုင်ရေးဆိုသည့် လမ်းကြောင်းထက်၊ အွန်လိုင်းက တစ်ဆင့် ဈေးဝယ်ရာတွင် ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေရန် တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု Facebook ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေးဗစ် မားကပ် ကပြောကြားသည်။
ဆေးခြောက်သောက်သုံးသူတွေ ဘာ့ကြောင့် လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းရတယ်ဆိုတာ
ဆေးခြောက် သုံးရတာ အပန်းပြေတယ် ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။ ပြဿနာက ဆေးခြောက်ကြောင့် အပန်းပြေတာ အရမ်းများသွားရင် နှုံးပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွ မရှိတော့တာ ပါပဲ။
အပတ်စဉ် ပုံမှန်လိုလို ဆေးခြောက် သုံးနေတဲ့ သူတွေမှာ မသုံးတဲ့သူတွေထက် ဒိုပါမင်း ပမာဏ နည်းလာ ပါတယ်။ ဒိုပါမင်းဆိုတာ ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်စပ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောဖြန့်ကျက်မှု ဆိုင်ရာ ဓာတုဓါတ် တစ်မျိုးပါ။ ဆေးခြောက် အစွမ်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှုတွေပြောင်းလဲ လာပြီး ဆေးခြောက် သုံး သူတွေမှာ ဒိုပါမင်း ပမာဏများနေ လိမ့်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ PET ဦးနှောက်ဓါတ်မှန် ရိုက်ကြည့်လိုက် တဲ့အခါ ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတာကို အံ့သြစွာနဲ့ပဲ တွေ့ရှိခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဆေးခြောက်သုံးတာ အကြိမ်ရေနည်းသူတွေထက် ဆေးစွဲနေသူတွေမှာ ဒိုပါမင်းပမာဏ အနည်း ဆုံးဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရှိရပြီး အဲ့ဒီ့လိုဒိုပါမင်း ပမာဏ သိပ်နည်းတဲ့အတွက် ဆေးစွဲသူတွေဟာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိတော့ပဲ တစ်ခါ တစ်လေမှာ စိတ်ကျရောဂါဝင် နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မှာတော့ ဆေးခြောက် သုံးသူတွေဟာ တက်ကြွမှုမရှိပဲ ထုံထိုင်းလေးပင်လာတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆေးခြောက်ဟာ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါအစရှိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေ ကို ရေရှည်မှာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက် အရမ်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ ဆေးခြောက် သုံးရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ စိတ်ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ပိုများပါတယ်။
နိုင်ငံဂုဏ်ကို တက်စေသည့် ကရင်လူငယ် ၅ ဦး
Monday, March 30, 2015 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
လေယာဉ်မှူး ကရင်အမျိုးသမီး နော်ခူးကူဖော
နော်ခူးကူဖောဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေယာဉ်မှူး ဖြစ်လာတဲ့ ပထမဆုံး ကရင် အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်ဘောလုံး ကလပ်က ကလယ်ဟဲ
နောက် တဦးကတော့ အင်္ဂလန်ဘောလုံးကလပ် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် အကယ်ဒမီ ယူ ၁၈မှာ ကစားနေတဲ့ ကလယ်ဟဲဖြစ် ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ရလာတဲ့ ဂျပ်စမင်
အသံချိုချိုနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုပြီး အင်တာနက် လူမှုရေးကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ နာမည်ရလာတဲ့ ဂျပ်စမင် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်က သူရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုလူပေါင်း သန်းနဲ့ချီကြည့်ရှုကြပါတယ်။
နောက်တဦးကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်လာတဲ့ လယ်ထူး ဖြစ်ပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံက အားကစားသမား မာရီယာထီး
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုင်ငံအဆင့် အလေးမ ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံက အားကစားသမား မာရီယာထီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဒါ ၅၇ ကီလိုတန်း အလေးမပြိုင်ပွဲမှာ မာရီယာက ဒုတိယရခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Karen Story
The post နိုင်ငံဂုဏ်ကို တက်စေသည့် ကရင်လူငယ် ၅ ဦး appeared first on DVB.
စမတ်ဖုန်းဖြင့် အချိန်တိုင်း စာရိုက်မှု လူ့ဦးနှောက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်
Monday, March 30, 2015 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
စမတ်ဖုန်းနဲ့ အချိန်တိုင်း စာရိုက်နေခြင်းဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်လာပါပြီ။ ဒါဟာ လူ့ဦးနှောက်ကို ပြောင်းလဲစေ တယ်လို့ ဥရောပ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ဇူးရစ် ETH တက္ကသိုလ် မှ ဒေါက်တာ အာကိုဂို့ရ်ှဟာ ညာသန်စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတွေကို EEG ဦးနှောက်လှိုင်း တိုင်းခေါင်းဆောင်းတွေ စွပ်ပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂို့ရ်ှဟာ ဖုန်းရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပုံကို မှတ်တမ်း တင်ထားသလို ဖုန်းကို လက်မ၊ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်တို့နဲ့ ထိတွေ့မှုလုပ်စဉ်မှာ ဦးနှောက်က ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နေလဲ ဆိုတာကိုပါ လေ့လာ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ရှိချက်တွေ ကိုလေ့လာရာမှာ ဖရီးဘော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မာဂလိုင်းရှီထရစ်က ကူညီပေးခဲ့ ပါတယ်။
“ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ အရင်နေ့တွေက ဖုန်းသုံးစွဲချိန် ပမာဏနဲ့ သွားပြီးတော့ ဆက်နွယ်မှု ရှိနေတယ်။ ကျမတို့က ဖုန်းထဲက မှတ်တမ်းတွေ၊ ဘက်ထရီ မှတ်တမ်းတွေကို သုံးတယ်။ ဦးနှောက်လှိုင်း မှတ်တမ်းအရ သုံးစွဲမှု အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ပြီးတာနဲ့ ဦးနှောက် လှုပ်ရှားမှုကလည်း ပိုမြင့်လာတာကို တွေ့ရတယ်။”
လက်မနဲ့ လက်ညှိုး ထိပ်ဖျားတွေကို ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်ပေးတဲ့ ဦးနှောက်အပြင်လွှာရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ဖုန်း အလွန် အကျွံ သုံးစွဲမှုနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျနေပါတယ်။
“ဟောဒီ အနီစက်လေးတွေနဲ့ လျှပ်ခေါင်းတွေရဲ့အချက်ပြတွေကို တိုင်းတာဖို့ပေါ့နော်။ လူတယောက်နဲ့ တယောက်ကြားမှာ လျှပ်စစ်အချက်ပြတွေ အကြီးအကျယ် ခြားနားသွားပုံကို ကြည့်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက် အတွင်းက ဖုန်းကို ဘယ်လောက် သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။”
Current Biology ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ရလဒ်တွေအရတော့ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထိတွေ့ ခင်းဟာ ဦးနှောက်အပြင်လွှာပိုင်း အာရုံခံ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသစ်တဖန် ပုံသွင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲမှုဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို လေ့လာဖို့နဲ့ ရှေ့ဆက် စမ်းသပ်မှုတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဂို့ရ်ှက ပြောပါတယ်။
“ဒါကြောင့်ကိုပဲ ဖုန်းမှတ်တမ်းတွေကို အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ဖို့က ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခု ဖြစ်လာ ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒီ ဒစ်ဂျစ်တယ် မှတ်တမ်းတွေကို သုံးပြီး ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်နိုင် မှာပါ။
ဦးနှောက်ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှုကို လက်တွေလေ့လာပြီး ထိရောက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို တိုး တက် ဖော်ထုတ် လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူ ၂ ကုဋေနီးပါးခန့်ရှိပါတယ်။ ဖုန်းမှတ်တမ်းတွေက တိကျတဲ့ အချက် အ လက် အမြောက်အများကို ပေးနိုင်တာမို့ ဒီအရင်းအမြစ်ဟာ တကယ့်ကို အဖိုးတန်ပါတယ်လို့ ဂို့ရ်ှက ပြော ပါတယ်။
The post စမတ်ဖုန်းဖြင့် အချိန်တိုင်းစာရိုက်မှု လူ့ဦးနှောက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင် appeared first on DVB.
Monday, March 30, 2015 စားသောက်ဖွယ်ရာ
၀ိုင်ချစ်သူများအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ။ မိမိဖာသာ အိမ်မှာ ၀ိုင်ချက်လို့ရတဲ့ လွယ်ကူသော နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
၀ိုင်ချက်လုပ်ရန် အတွက် မချဉ်လွန်း မချိုလွန်းသော မိမိနှစ် သက်ရာ အနီရောင် သစ်သီးဖျော်ရည်၊ သန့် ရှင်း လတ် ဆတ်သော ဖန်ကရားနှင့် ထိုဖန်ကရားကို လုံအောင် ပိတ်သည့် ရာဘာဗူးစို့တို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဝိုင်ချက်နည်းက အရသာ နဲနဲပြင်းပါသည်။ ၄င်းဝိုင်ကို ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ရာ တွင်လဲ သုံးလို့ ရပါသည်။ လူဦးရေ ၃၂ ယောက်စာ သောက်သုံးရန် အတွက် ၀ိုင် ၁-ဂါလံ ချက်လုပ်သော နည်း ဖြစ်ပါသည်။
<< ပါဝင်မှု >>
၀ိုင်ဖောက်သည့် ကဇော်မှုန့်ဝ.၂၅ အောင်စ၊ သကြား (စားပွဲတင်ခွက်) ၄-ခွက်၊ သစ်သီးဖျော်ရည် ၁၂-အောင်စ၊ ရေအေးအေး ၀.၈ ဂါလံ တို့ လိုအပ်ပါသည်။
<< ပြုလုပ်နည်း >>
ရှေးဦးစွာဝိုင်ချက်တဲ့ ကဇော်မှုန့် ၊ သကြားနှင့် အချိုရည်တို့ ကို ဖန်ကရားထဲလောင်းထဲ့ပါ။ သကြား အရည်ပျော်သွားသောအခါ ရေထဲ့ပြီး၊ ရာဘာဗူးစို့ဖြင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အေး ၍ခြောက်သွေ့ သောနေရာတွင် ထားပေးပါ။ တစ်ရက်အတွင်းမှာပင် သကြားများအချဉ်ပေါက်ကာ alcohol အဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး၊ ဖန်ကရားထဲတွင် ပူစီပေါင်းဘောလုံးလေး များပြည့်လာသည်ကို တွေ့ မြင်ရ ပါမည်။ ထို့ နောက် ဘောလုံးလေးများသည် gas အသွင်သို့ ပြောင်းကာ ၀ိုင်ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်သောက် လို့ ရပါပြီ။ သို့ သော် ၀ိုင်ဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တ ၆-ပတ်ကြာမှ သောက်ပါက အရသာ ပိုကောင်းပါသည်။
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်းများအတွက် အစွမ်းထက် ဆန်ေ...
ပေါင် ၃၀ ကျော်လေးသည့် ဧရာမရင်သားများနှင့် အမျုိးသမ...
နေပူထဲ ထွက်ရသူတို့ အတွက် နွေကာလ ထိပ်တန်း အသားအရေ ထ...
စိတ်ဖိစီးမှုများကို နှစ်မိနစ်အတွင်း ဖြေဖျောက်ရအောင်...
အမျိုးသားတို့ ခံတွင်း ကျန်းမာပြီး သွားဖြူစင်စေမည့်...
ထမင်းကို အအေးခံစားလျှင် ကယ်လိုရီ ထက်ဝက်ကျော်လျော့န...
စကြာဝဋ္ဌာကြီးသည် ခန့် မှန်းထားသည်ထက် စောလျှင်စွာ ပျက...
Bandwidth ကို သက်သာစေမည့် Chrome extension အသစ်တစ်...
ဂျပန် သက်ကြီးပိုင်းတွေကို ဘယ်သူတွေ ပြုစု စောင့်ရှေ...
ညအမှောင်ထဲမှာ မြင်နိုင်တဲ့ ဆေးရည်ကို သိပ္ပံပညာရှင်ေ...
Facebook ထုတ် Messenger ကြောင့် အီးမေးလ် ကွယ်ပျောက...
ဆေးခြောက်သောက်သုံးသူတွေ ဘာ့ကြောင့် လေးလံ ထိုင်းမှို...
စမတ်ဖုန်းဖြင့် အချိန်တိုင်း စာရိုက်မှု လူ့ဦးနှောက်...
၁ မိနစ်အတွင်း လက်ဖ၀ါးတွေနူးညံ့အောင် ပြုလုပ်နည်း
NEX Mobile ဖုန်းတွေရဲ့ Firmware စုစည်းမှု
Apple ID Country/Region ပြောင်းနည်း
ကလေး၏ ဦးခေါင်းကို မလှုပ်ခါသင့်ပါ
အရေပြားအထူးကု ဒေါက်တာရဲသွင် နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်ြး...
ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေတဲ့ ကြက်သွန်နီ သံပုရာဆမ်း
လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ အာသီးယောင်ခြင်း ဝေဒနာတွေကို (...
အရေပြားပေါ် အဖုအပိန့် အနီကွက်ထခြင်းမှ ကင်းဝေးစေမယ့်...
ဗုံလုံသီး ဆိတ်သား အစာသွပ်
Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တုို့တွင် ပါဝင်သော...
ဆေးဖက်ဝင်မြန်မာ့ သနပ်ခါးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Selaginella သို့မဟုတ် အပင်လောကရဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်
အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်ရန် အိပ်ရေးဝအော...
ဘာသာအလိုက် သင်ကြားခြင်းကို ရပ်တန့် ပြီး ခေါင်းစဉ်အ...
ဈေးမ၀ယ်ပဲ မနေနိုင်သူများ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
ကဗ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးကို တော်လှန် ပြောင်းလဲခဲ့သော စာတမ်...
ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ညွှန်းဆိုနေတဲ့ အသက်အရွယ် ...
ဘီလျံနာ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာဘွဲ့တွေရဖို့ လိုသလ...
UK နှ​င့် Australia ရှိ​ တ​က္က​သိုလ်များ​မှ B.Sc ...
ြ​မန်မာ​ကျော​င်း​သားများ​အတွ​က် UNSW ပညာ​သင်ဆု​ ...
မူး​လာ​လျှ​င်ေ​မာ​င်း​၍​မ​ရသ​ည့်​ ကား​စ​နစ်တီ...
မိ​ခင်ကiPhone ကို​သိ​မ်း​လို​က်ေ​သာေြ​ကာ​င့် ...
ခြသေ့င်္မြို့တော်က ဧရာမ သူရဲကောင်း
Top Paid Android Apps, Games & Themes Pack - 23 Ma...
CCleaner 5.04.5151 + All Edition Crack (5.37 Mb)
Nero Burning ROM & Nero Express 2015 v16.0.23.0 Po...
Non-Jailbreak iOS Device များတွင် မြန်မာစာ ရရှိအော...
Winrar Software ကို အသုံးပြုပြီး ဖိုင်ခွဲနည်း-ဆက်န...
XPERIA T2 ULTRA D5303_19.1.1.A.0.165 V4.4.3 ကို Ro...
Samsung Android Mobile တွေအတွက် Version 4.1 ထက်နိမ...
i-Mobile i-Style 2.1 to 7.5 Firmwares
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးဖြစ်၍ အ...
Xiaomi ထုတ် Mi/Redmi ဖုန်းတွေမှာ Google Play နဲ့ G...
Samsung Galaxy S6 SM-G920F ကုို Root လုပ်နည်း
Android အတွက် MyatMin Key – Myanmar Keyboard အသစ်ထ...
ခေတ်အမြင် ခေတ်အတွေးနှင့် ပညာရေး
Dictatorship အာဏာရှင် အမျိုးမျိုး
လူကို ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက် (၁၈) မျိုး
နေလောင်ကာကရင်မ် ရွေးချယ်နည်း လမ်းညွှန်
ဂိမ်းဆော့ရပ်၍ အိပ်ရာဝင်ရန် ဖခင်က ပြောလိုက်သဖြင့်ေ...
ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ဆံကေသာ ထိခိုက်နေသူတို့ စ...
တကယ် ထိရောက်မှု ရှိသည့် သဘာဝ ကုထုံးများ
ငါးနှင့်ပင်လယ်စာကို အရွက်ဖြင့် တွဲဖက်စားပေးခြင်းဖြ...
ခါးနာဝေဒနာ ခံစားရသူဦးရေ ပိုမိုများပြားလာ၊ နာရီပို...
မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးလျှင် ကလေး IQ မြင့်မား
ရန်ကုန်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း...
အသက် ၆၅ နှစ်အထက် သက်ကြီးသူများကို လစဉ် ကျပ်နှစ်သော...
အသက်ကြီးလာလေ ဦးနှောက် စွမ်းရည် ပိုမြင့်လာလေ
စိတ်ကျနေသူ အတွက် အချိန်သည်
iPhone ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Android Phone ရဲ့ အားသာချက...
Facebook Page မှာ Call-to-Action Button ထည့်သွင်းန...